မွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည့်ဆေးပြားအကြောင်းမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ | Bezzia
မာရီယာဟိုဆေး Roldan | | ကျန်းမာခြင်း, လိင်
တားဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဒဏ္myာရီများစွာရှိသည် သန္ဓေတားဆေးသည်မည်သည့်အရာနှင့်၎င်းသည်အဘယ်အရာမဟုတ်ကြောင်းနှင့်အထူးသဖြင့်၎င်းသည်မည်သည့်အရာနှင့်၎င်းအတွက်မသင့်တော်ကြောင်းအတိအကျနားလည်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းကိုမြေကြီးပေါ်ပစ်ချသင့်သည်။ သန္ဓေတားနည်းကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်သင်သည်သန္ဓေတားဆေးအကြောင်းကိုကောင်းစွာသိရှိထားရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်ဆေးမသောက်မီဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့်သင့်အနေဖြင့်သူသည်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဆေးလုံးအတွက်အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်သင်၏မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါလိမ့်မည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကခင်ဗျားက "ငါဆေးလုံးကိုသောက်သင့်သလား" ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးခဲ့တယ်။ သို့မဟုတ် "ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှမွေးကင်းစကလေးသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်လုပ်နိုင်ပါ့မလား" သို့မဟုတ် "ငါဆေးပြားကိုသောက်ပြီးဆေးလိပ်သောက်လျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ" သန္ဓေတားဆေးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌မေးခွန်းများစွာရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်ခြင်းသို့မဟုတ်သောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကြိုတင်သံသယမရှိဘဲကောင်းစွာအသိပေးရန်လိုအပ်သည်။၎င်းသည်အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။
သင်ရုံမှတ်မိဖို့ရှိသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအားလုံးသည်တူညီသောအလုပ်မလုပ်ပါထို့ကြောင့်သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကသူတို့ကိုကောင်းကောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ကသင့်အားအလားအလာရှိစေသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအားလုံးကိုခံရပ်ရန်လိုအပ်ပြီးမတူညီသောအရာများအတွက်သင်ပြောင်းလဲသင့်သည်။
ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တချို့ဖြေချင်ပါတယ် အခုသင့်ခေါင်းပေါ် မှနေ၍ ပြေးနေသောမေးခွန်းများ... ဆိုင်းငံ့ထားသောမေးခွန်းတစ်ခုရှိလျှင်သို့မဟုတ်အခြားမေးခွန်းတစ်ခုကိုသင်သာမေးလိုပါကမရှက်ပါနှင့်မှတ်ချက်မရေးပါနှင့်။
10 ဆေးလုံးကိုသောက်ပြီးတဲ့အခါအမွှာ (သို့) သုံးဆခွဲစိတ်ပြီးကိုယ်ဝန်ရှိဖို့လွယ်ကူပါသလား။
မွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည့်ဆေးများတွင်အမျိုးသမီးများ၏မျိုးဥထွက်ခြင်းကိုဟန့်တားသောဟော်မုန်းများပါရှိသည်။ မျိုးဥထွက်နေစဉ်ဥကိုဥမှထုတ်လွှတ်သည် မျိုးဥထွက်ခြင်းမရှိဘဲသန္ဓေတည်နိုင်သောမျိုးဥသို့မဟုတ်မွေးဖွားနိုင်သည့်ကိုယ်ဝန်မရှိပါ။ သားအိမ်ခေါင်းတွင်ရှိသောချွဲများသည်ပိုမိုထူထပ်လာပြီးသုက်ပိုးရှိလျှင်သုက်ပိုးသည်သားအိမ်အတွင်းသို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရန်နှင့်ဥသို့ရောက်ရှိရန်ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ ၎င်းသည်သားအိမ်၏နံရံများကိုလည်းပါးလွှာစေသဖြင့်မျိုးဥတစ်လုံးကိုမျိုးပွားနိုင်သည့်ဥသည်သားအိမ်ထဲသို့ထည့်ရန်အလားအလာနည်းသည်။
ပရိုဂျက်စတုန်းဆေးလုံး ဒါကြောင့်ပဲကွဲပြားခြားနားပြုမူ။ သားအိမ်အသားလွှာ၏နံရံ, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာချွဲထူ, နှင့်မျိုးဥထွက်တော့ဘူး။ ၎င်းသည်ပေါင်းစပ်ဆေးလုံးနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်အများအားဖြင့်အမျိုးသမီးများအသုံးပြုလေ့ရှိပြီးနို့တိုက်ချိန်တွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်ဆေးသောက်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်သင်၌အသုံးပြုသောသန္ဓေတားနည်းစနစ်များစွာရှိသည်၊ သို့သော်ဆေးလုံးကိုသုံးသူနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမသက်ရောက်သောအမျိုးသမီးအများစုသည်၎င်းသည်ထိရောက်မှု ရှိ၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဌစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပိုပြီးပုံမှန်ဖြစ်လာ အလင်းနှင့်နာကျင်မှုမရှိခြင်း၊ သင်သည်လည်းကွန်ဒုံးမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံနိုင်သည် (အကယ်၍ သင်တည်ငြိမ်သောမိတ်ဖက်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ (STDs) ကိုရှောင်ရှားရန်ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆေးသည် STDs ကိုမကာကွယ်သောကြောင့်။
သင်နှင့်သင့်လျော်ပါကအချိန်ကာလတစ်ခုအကြာတွင်ဆေးကိုမသောက်ရန်အဘယ်ကြောင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်မျှမရှိပါ။ ဒါ မင်းအပေါ်မှာမူတည်တယ် သင်၏ဘဝပုံစံအရသို့မဟုတ်ကလေးများကိုရှာဖွေလိုပါကဆရာဝန်ကသင့်အားအကြံပေးသည်။
မှန်ကန်စွာအသုံးပြုလျှင်ဆေးလုံး ၉၉% ထိရောက်တယ်၊ သို့သော်ယင်းကိုသောက်ရန်မေ့လျော့။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများမပြုလုပ်သောအမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့တွင်ရှိလျှင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်သည်။ မြေသြဇာကောင်းသောနေ့ရက်များ။ ထို့အပြင်သင်၌ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်ပantibိဇီဝဆေးတစ်မျိုးသောက်လျှင်၊ လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆေး၏ထိရောက်မှုလျော့နည်းသွားနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်ပယ်လျှင်၎င်းသည်မသောက်နိုင်ပါ။ မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
၎င်းသည်ဟော်မုန်းများ၏ဟော်မုန်းများဖြစ်သောကြောင့်သင်ဆေးမသောက်ပါကအန္တရာယ်ကင်းပါသည် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသန္ဓေတားဆေးကိုဖုံးအုပ်ရန်လုံလောက်လိမ့်မည်။ သင်တစ် ဦး ဆေးလုံးကိုလက်လွတ်လျှင် အဖြစ်မကြာမီသင်မှတ်မိအဖြစ်ယူပါ ထို့နောက်ပုံမှန်ဆေးသောက်သည့်အတိုင်းဆက်သောက်ပါ။ လိင်မှုကိစ္စတွင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်လိုပါကအံ့အားသင့်စရာများကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
သင်နေ့စဉ်သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်သင့်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်သောက်သုံးခြင်းသည်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည် မင်းမှာအလေ့အထရှိလိမ့်မယ် တဖန်သင်တို့မေ့လျော့နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်မျိုး (သို့) နှစ်ခုထက်ပိုသောဆေးဝါးတစ်မျိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအခြားတစ်ခုမှပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဟုလူသိများသည်။ အချို့သောဆေးဝါးများသည်ဟော်မုန်းအမျိုးအစားများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုသန္ဓေတားဆေး။
သန္ဓေတားဆေးနည်းစနစ်အများစုကိုသတ်မှတ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ထားသောသန္ဓေတားနည်းကိုအခြားဆေးဝါးများ (နှင့်၎င်းတို့သည်) ကိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့်ထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုဆရာ ၀ န်မှအကြံဥာဏ်ပေးရလိမ့်မည်။
ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကတည်းကပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်ကြသည် ယောနိ၏ ph ကိုပြုပြင်မွမ်းမံပါလက်ရှိဆေးပမာဏနည်းသောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဖြင့်ရောဂါကူးစက်မှုအကြိမ်ရေလျော့နည်းသွားသည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့မှိုကိုရှောင်နိုင်ဖို့သင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
ဆေးလုံးကိုသောက်ပြီးတဲ့အခါအမွှာ (သို့) သုံးဆခွဲစိတ်ပြီးကိုယ်ဝန်ရှိဖို့လွယ်ကူပါသလား။
ဤ ဒါကဒဏ္aာရီတစ်ခုပဲ။ ဆေးများနှင့်ကုသမှုကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်မျိုးဥများစွာကိုတစ်ခါမျှမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ ဝိရောဓိ! သူတို့ကိုနောက်ထပ်ဒဏ္myာရီတစ်ခုအဖြစ်မြုံစေသည်ဟုစွပ်စွဲကြသည်။
အဲဒါဆေးလုံးပါပဲ သာအကာအကွယ်မဲ့ကြားဆက်ဆံရေးပြီးနောက်ယူ။ ဒါဟာအရေးပေါ်ကုသမှုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုသန္ဓေတားဆေးနည်းလမ်းအဖြစ်မသတ်မှတ်သင့်ပါ၊ ၎င်းကို ၇၂ နာရီအကာအကွယ်မဲ့သောလိင်ဆက်ဆံမှုပြုပြီးနောက်ယူရမည်။
ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုများ၌တည်၏ ကင်ဆာ၏ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုတိုးလာလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ ဆေးယဉ်ပါးသည့်အမျိုးသမီးများ၌ပင်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်တတ်သည်။
လည်ပင်းကင်ဆာရောဂါသည်ဆေးလိပ်နှင့်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းခြင်းနှင့်အတားအဆီးမရှိသောနည်းလမ်းများဖြင့်ပိုမိုဆက်စပ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဆေးသောက်သောမိန်းမများသည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုမသောက်သောသူများထက် ပို၍ စစ်ဆေးလေ့ရှိသည် အစောပိုင်းရောဂါထွက်သယ်ဆောင် precancerous ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏။
ခံတွင်း contraceptives Ovary ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည် ကုသမှုကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းထားသည်။
သုံးစွဲသူ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကျဆင်းမှုကိုခံစားကြရသည်။ ဖြစ်နိုင်တာထက်ပိုပါတယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာ အခြားအမိန့်ထက်။ အကယ်၍ ပြproblemနာဆက်ရှိနေသေးပါက၊ အခြားသန္ဓေတားနည်းကိုအသုံးပြုရမည်။
အဆီမရဘူး ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိအသုံးပြုသောဆေးများနှင့်အတူ။ သင်သာမန်ထက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်လျှင်သင်၏အစားအစာကိုသာထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကလေးမွေးဖွားချိန်မည်မျှကြာသည်ဖြစ်စေမွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းခြင်းမရှိပါ။ အချို့ကိစ္စများတွင်ဖြစ်နိုင်သည် လအနည်းငယ်ရာသီလာခြင်းမရှိခြင်း, ဒါပေမယ့်ဒီအလိုအလျောက်ဖြေရှင်း။
၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချ သားအိမ် cystရင်သားကင်ဆာသည်ရာသီလာခြင်းနှင့်ဆိုင်သောကြွက်တက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည် သွေးအားနည်းရောဂါ.
မင်းနားလည်မယ်ဆိုရင် 12 နာရီမတိုင်မီ သငျသညျချက်ချင်းယူ။ ပုံမှန်အတိုင်းအချိန်မှာလာမည့်တ ဦး တည်းနှင့်အတူဆက်လက်သငျ့သညျ။ သို့သော် ၁၂ နာရီကျော်သွားလျှင်သင်နောက်ထပ်သန္ဓေတားဆေးကိုအသုံးပြုရမည်။
ယူလို့မရဘူး မည်သည့်ဆေးဝါးမဆို နို့တိုက်နေစဉ်။ ဤအချိန်တွင်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဆေးရွက်ကြီး ကျန်းမာရေးအတွက်အမြဲအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည် နှင့်ဆေးလုံးနှင့်အတူ၎င်း၏ဆိုးကျိုးများတိုးမြှင့်နေကြသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့်သူတို့ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ခေါ်ယူတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒါကိုသေချာအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ် ဆေးသောက်ရန်မေ့လျော့ခြင်းမှသွေးထွက်ခြင်းမဟုတ်ပါ သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ထံမှ။
ဤရွေ့ကားအချို့ မိန်းမတော်တော်များများသည်သန္ဓေတားဆေးကိုမေးသောမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ။ သန္ဓေတားဆေးကိုမသောက်ရန်မဆုံးဖြတ်မီကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒါပေမယ့်သင်ကသံသယတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းပြီးပြီဆိုရင်သင်ကျန်းမာရေးကောင်းနေပြီဆိုရင်၊ သူတို့ကိုသင်သောက်ချင်လား၊ မသောက်ချင်ဘူးဆိုရင်သင်အမြဲတမ်းလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်နိုင်ပြီးသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » စိတ်ပညာနှင့်စုံတွဲ » လိင် » ပိုးသတ်ဆေး
975 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားမေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းထိန်းချုပ်ဆေးပြားကိုတစ်နှစ်ခွဲကျော်သောက်နေပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်ဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည် , amoxicillin5ကို 500 ရက်သောက်နေစဉ်ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ခြေမြင့်မားပါကသင်၏အဖြေကိုကျွန်ုပ်သဘောပေါက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည်မွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည့်ဆေးများကိုသောက်နေသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ပြင်းထန်သောသွေးထွက်ခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်းခံစားရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုထိခိုက်ခြင်း (သို့) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရှိဘဲချန်ထားနိုင်ပါသလား။
မင်္ဂလာပါစန္ဒြာ၊ ငါသည်လည်းဆေးပြားများသောက်နေပြီး၊ တန်ဆန်တီလင်းရောင်ခြည်ကြောင့် amoxicillin ကိုသောက်ခဲ့သည်။ ဤသည် entibiotic မှာအားလုံးဆေးပြားပြောင်းလဲပစ်မထားဘူး။ သူတို့ကိုတာ ၀ န်ယူမှုဆက်လုပ်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲခန့်ကကျွန်ုပ်ဆေးသောက်နေပြီ။ ပantibိဇီဝဆေးများကို ၁၀ ရက်သောက်နေပြီ၊ ယခုငါဆေးပြားကိုဆေးပြီးအောင်အချပ် ၄ ခုကျန်ရှိနေသည်၊ သို့သော် ၃ ရက်ကြာတောက်ပသောအနီရောင်ကိုငါစုပ်နေခဲ့ပြီ၊ ?
ငါမွေးတာကိုနှစ်နှစ်လောက်ကြာအောင်လုပ်နေတာ။ သူတို့မှာဘာပြproblemနာမှမရှိဘူး ကျွန်ုပ်ပြproblemနာမှာအောက်ပါဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်သို့မဟုတ် ၅ ရက်ကကျွန်ုပ်ကောင်းစွာမမှတ်မိ၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်သည်ဆေးလုံးကိုသာသောက်သုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအချိန်များကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဂရုစိုက်ကြသော်လည်းမနေ့ကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အပိုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်ဂရုမစိုက်ပါ။ ငါပုံမှန်ဆေးများကိုပုံမှန်သောက်ခဲ့သည်။ ငါကဆေးပြားကိုဆက်လက်သောက်သုံးပြီးထိုနေ့တွင်ပင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုလျှင်ငါ၌ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အခွင့်အရေးရှိပါသလား ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ။
၁၀ နှစ်ကြာဆေးသောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီဆေးဟာကိုယ်ဝန်မရအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တာမို့မိန်းမတစ်ယောက်လိုစိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ လိင်စိတ်နည်းတာ၊ monotony ဖြစ်နေတာ၊ ထိုကဲ့သို့သောလှပပြီးထိရောက်သောဆေးဝါးများဖုံးလွှမ်းထားသောဖြစ်နိုင်သည့် fibroid ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပြီဟုပြောနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်မိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းကိုယခင်ထက်ပိုမိုလိုလားတောင့်တခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ကိုပေးဖို့မတွန့်ဆုတ်ဘဲငါမထောက်ခံဘူး
မင်္ဂလာနံနက်ခင်း၌၊ အကယ်၍ သင်တစ်နေ့တည်းတွင်ပင် ၂ လုံးလုံးမှားယွင်းစွာသောက်မိလျှင်ဘာလုပ်သင့်သလဲဟုမေးလိုသည်။ သူတို့ကို ဆက်၍ သင်သေတ္တာအဆုံးတွင်တစ်ခုပျောက်ဆုံးနေသည်သို့မဟုတ်နောက်တစ်နေ့တွင်ယင်းကိုဆက်မသောက်ဘဲထို နေ့မှစ၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အဖြေကိုစောင့်ပါ။
ငါဆေးပြားကိုယူပြီးမေ့ပစ်ရန်အတွက်, ငါနောက်ထပ်အသစ်သော box ထဲကနေနောက်ထပ်သုံးခုရက်ပေါင်းကြာရန်ဆက်လက်ငါ box ကိုပြီးဆုံးတဲ့အခါငါ။ ငါ့အမေး, အခုစည်းမျဉ်းငါ့ကို3ရက်အကြာမှာအနိမ့်မည်နည်း။ ဘာလုပ်သင့်သနည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်
ငါဒီဆေးကိုသောက်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ဒီလကငါ့အချိန်ကုန်လာပြီ၊ ပြီးပြီ။ ဒီလငါဆေးမသောက်တော့ဘူး၊ ကွန်ဒုံးကိုသုံးမယ်။ ကွန်ဒုံးလား။
rocio martel ortega ဟုသူကပြောသည်
rocio martel ortega မှစာပြန်ပါ
Hello Karol၊ တစ်လနားပြီးကွန်ဒုံးနှင့်ဂရုစိုက်ပါကပြproblemနာမရှိပါ။ သတိထားသင့်သည်မှာမိမိကိုယ်ကိုဂရုတစိုက်ဂရုစိုက်ရန် (များစွာသောတန်ဖိုးရှိ) သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ဆေးပြားမှခန္ဓာကိုယ်မှ“ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့်အခါ” သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောမျိုးပွားနိုင်လိမ့်မည်ကိုသတိရပါ။
MujeresconEstilo.com ကိုဖတ်ရှုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင့်ထံမှမှတ်ချက်များထပ်မံရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ။ ငါမှတ်ချက်ပေးချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကျွန်တော်မသိဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါဒီမှာရေးနေတယ်။ လွန်ခဲ့သောတစ်လကငွေရေးကြေးရေးအရငါဆေးကိုမသောက်ဘဲနောက်ပြန်မသွားဘဲတစ်ပတ်နေခဲ့သည်။ တစ်ပတ်အကြာ၎င်းဆေးဝါးကိုအကြောင်းကြားပြီးသူမကကျွန်ုပ်၏ကာလသည်နောက်လာမည့်ဆေးလုံးကိုစတင်ယူရန်ပြောခဲ့သည်၊ ငါဆေးတွေကိုဆက်သောက်တယ်၊ ဆရာ ၀ န်ဆီကိုသွားတယ်၊ သူတို့မှာဆီးစစ်တာပေါ့၊ ငါဘာမှမလာဘဲငါ့ကိုလာတွေ့ဖို့ဘာမှပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အခုငါ dsp ကိုပြန်စခဲ့တယ်။ နောက်တဖန်ကာလနှင့်သွေး၏။ ငါ့ရည်းစားကငါ့ကိုဆေးကြောပေးသည့်မိန့်ခွန်းတစ်ခုတွင်ဘာအကြောင်းဖြစ်မှန်းမသိတော့သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ပိုများသောကြောင့်ငါယူပြီးသားစာရင်းများကိုအကွက်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်သည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ခု၊ သုံးခုနှင့်နောက်ဆုံးကိုမေ့နေသည်။ ညဥ့်နက်သည်ငါမသိ၊ ငါနှစ်ကောင်ယူခဲ့သော်လည်း၊ ငါမူကားတစ်စုံတစ်ခုပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်ငါသွေးထွက်ထွက်ပြီးချိန် မှစ၍ အခြားသွေးတစ်မျိုးဖြစ်လျှင်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်မေးခွန်း ကျွန်တော့်အမှု၌ကျွန်ုပ်သည်စည်းကမ်းရှိ၊ မရှိနှင့်သောက်ရန်ပျောက်ဆုံးခြင်းရှိမရှိမသိခဲ့ပါကလွန်ခဲ့သောညကဆေးပြားနှစ်ချောင်းကိုတွေ့ရခြင်းမှာမကောင်းပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုစွန့်ခွာပြီးအလွန်ကြောက်နေပြီးအလွန်နာကျင်ပါသည်။
ဟဲ၊ ငါပုံမှန်သောက်ပြီးနောက် ၁၂ နာရီတွင်ကျွန်ုပ်ဆေးလုံးကိုသောက်လျှင်ကော။
ကျွန်ုပ်မေးခွန်း - ဆေးကိုသောက်နေစဉ်ကာလကိုပြန်မစခင်နှစ်ရက်အလိုတွင်အစက်အပြောက်အနည်းငယ်ကိုသတိပြုမိသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်
ငါသန္ဓေတားဆေးကိုသောက်ပြီးနောက် 15 မိနစ်ငါ reflux ခဲ့ငါအော့အန်မပြုခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါပြaနာတစ်ခုရှိမရှိသိလို ... အမြန်အဖြေချင်ပါတယ် ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ခေါင်းကိုက်ခြင်းမခံစားရဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ETEC ကကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်လို့ပြောချင်တယ်
Laura Perez အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ။ ငါသန္ဓေတားဆေးသည်မည်မျှထိရောက်သည်ကိုသိလိုသည်။ တစ်ပတ်လျှင်ကျွန်ုပ်ဆေးများသောက်နေရသည်။ ကျွန်ုပ်နေမကောင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကုထုံးများထဲမှတစ်ခုမှာပantibိဇီဝဆေးဖြစ်သည်။
ငါဒီဆေးတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ပတ်ကမှစတင်ပြီးနေ့ ၆ ရက်နဲ့ ၇ ရက်တွေမှာစတင်သောက်ခဲ့တယ်။ ငါမသောက်တော့ဘူး၊ ဒုတိယအပတ်မှာငါရည်းစားနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်။ ဆေးမသောက်မီတစ်ရက်အလိုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဆေးလုံးကိုမသောက်ခဲ့ပါ၊ သို့သော်ထိုနေ့တွင်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်မှကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆေးလုံးကိုသောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ် ၀ န်ရလာနိုင်ခြေရှိမရှိသိလိုသည်။
ငါသွေးထွက်တဲ့အချိန်ကာလရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာ၊ တစ်ပါတ်အကြာဒီနေ့မွေးဖွားမှုကိုတားဆီးနိုင်တဲ့ဆေးတွေကိုစတင်သောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကသွေးထွက်သံယိုမတိုင်ခင်ကျွန်မမှာအရေးပေါ်ဆေးလုံးတစ်ချောင်းယူခဲ့တယ်။ အကယ်၍ သန္ဓေတားဆေးများသည်အကျိုးသက်ရောက်ပါကကျွန်ုပ်သည်ရက်အနည်းငယ်မတိုင်မီ (သို့) သတ္တမမြောက်နေ့ရက်ကိုယနေ့ခေတ်တွင်ထားခဲ့သင့်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဤစည်းမျဉ်းကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးနေဆဲဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်။ ' သွားတော့မယ်။ ငါ့မှာအမာရွတ်တွေမရှိဘူး၊ အန်လည်းမရှိဘူး၊ ပုံမှန်အူသိမ်လှုပ်ရှားမှု (သူတို့ ၂ ဦး ကိုပထမ ဦး ဆုံးယူခဲ့တဲ့အချိန်မှာ) ။ ကျွန်ုပ်သိချင်တာကပုံမှန်ရာသီလာခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ရှေ့သို့သွားရမည်ဟုပြောသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၌မကောင်းသောအယူအဆတစ်ခုရှိသည်၊ သို့မဟုတ်သူတို့အကျိုးသက်ရောက်ခြင်း မရှိ၍ ကျွန်ုပ်အမှားတစ်ခုခုပြုလုပ်မိလျှင်ဖြစ်သည်။
အန်ဂျလီကာမင်္ဂလာပါ။ သင်၌တည်ငြိမ်သောမိတ်ဖက်တစ် ဦး ရှိလျှင်၊ သင်ကကွန်ဒုံးဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်လိုသည့်အခါသင်၌လိင်ဆက်ဆံဖက်များများများများစားစားမရှိသောကြောင့်သင်သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဆေးပြားကိုသောက်သုံးရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တည်ငြိမ်သောလိင်ဆက်ဆံဖက်များများမရှိသောကြောင့်ဆေးများသည်လိင်ဆိုင်ရာရောဂါများကိုဂရုမစိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အေအိုင်ဒီအက်စ်ကဲ့သို့သော သင်မကြာခဏလိင်မဆက်ဆံပါကသို့မဟုတ်တည်ငြိမ်သောမိတ်ဖက်တစ် ဦး မပါရှိလျှင်၊ သင့်ကိုမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရန်ဆေးပြားများသောက်ရန်မတိုက်တွန်းပါကသင့်အားကွန်ဒုံးသုံးရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။ MujeresconEstilo ကိုဖတ်ရှုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဟယ်လို!!!! Unaa queruntikk … .. ငါသန္ဓေတားဆေးသုံးခုကိုရောင်းပြီးသုံးလလောက်ရောင်းခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၄ လအတွက်ငါမသောက်ခဲ့ဘူး၊ ဆက်နွယ်မှုတွေမရှိခဲ့ဘူး။ အခုငါသူတို့ကိုစယူရတော့မယ်ဆိုရင်ငါသူတို့ကိုတဖန်မျိုချချင်တယ်လား ?? ? တန်းတူ? ရာသီလာခြင်း၏ပထမနေ့ ???? ကျေးဇူးပြု၍ တုန့်ပြန်ပါ .. 🙂ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါ ၂ လလောက်သောက်နေတယ်၊ ​​ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအနားယူမယ့်ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်ငါ့မှာအချိန်ရှိခဲ့တယ်၊ ငါပျောက်နေတဲ့ဆေးတွေကိုဆက်သောက်ရမရဆိုတာလည်းမသိဘူး။ ၁၅ ရက်တစ်ကြိမ်ကာလတာပုံမှန်ဖြစ်သလား။ လာမယ့်အပတ်မှာငါ့ဆီပြန်လာမလား
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သောအချိန်ကကျွန်ုပ်သည်ဆေးများကိုသောက်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ဆက်နွယ်မှုမှမရှိခဲ့သည့်အချိန်ကာလတွင်ဆေးပြား ၃ ခုကိုမေ့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ဆုံးနေ့တွင်ဆေးများဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်မလာခဲ့ပါ ?????
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် trifamox ibl 500 နှင့် ibuprofen ကိုသောက်နေပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်သည် angina နှင့်အတူရှိနေပြီး yasminell လို့ခေါ်တဲ့ဆေးကိုသောက်ပါမယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်စရာမလိုဘဲလိင်ဆက်ဆံပြီး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လကကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ခြေအချို့ရှိပါသလား။ မင်းရဲ့အဖြေကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါဆေးပြားကိုယူ။ မေ့ခြင်းအဘို့, ငါနောက်ထပ်နောက်ထပ်အသစ်သော box3မှနေ့ရက်ကာလကနေယူရန်ဆက်လက်ငါ box ကိုပြီးဆုံးတဲ့အခါငါငါ့မေးခွန်းကိုယခုငါ့စည်းမျဉ်းသည်ငါ့ကို3ရက်ထက်နောက်ကျလိမ့်မည်နည်း ငါဆေးသောက်ပြီးတတိယမြောက်နေ့၌ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ကျွန်ုပ်စတင်သောက်သလား၊ (သို့မဟုတ်) ဘာမျှမဖြစ်ခဲ့ဖူးသည့်အတိုင်းပုံမှန်သောက်နေသလား။ ကူညီကြပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် BELARA ကိုတစ်နှစ်ကြာယူပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကာလအတိအကျဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူတို့ကကျွန်ုပ်အားအမြဲပြောခဲ့သည်မှာ ၂၆ ရက်မှ ၃၃ ရက်အထိဖြစ်သည်။ လောလောဆယ်ကျွန်ုပ်အနားယူနေသည့်ရက်သတ္တပတ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြားများမသောက်ပါက ၃၁ ရက်သာရှိသေးပြီးရာသီလာခြင်းမှာလည်းမကျဆင်းသေးပါ။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ ငါ့ကိုဒေါင်းလုပ်မလုပ်ရသေးလျှင်နောက် box ကို debbo စတင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဤဆေးကိုသောက်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ခရီးစဉ်တစ်ခုသို့သွားပြီးဆေးပြားများကိုမေ့သွားသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်အချိန်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ထပ်မံသောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ အရင်, ဒါကြောင့်ဆေးသောက်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူး၊ ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ငါအခုသောက်နေပြီလား၊ ၂၈ ရက်အကြာမှာနောက်တစ်ခါထပ်ကျပြန်ရောလားစောင့်ကြည့်နေတာလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သည်မကြာမီကျွန်ုပ်အားအဖြေပေးနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်
ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းများတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါ၊ သို့သော် kc / condom နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရန်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ - သန္ဓေတားဆေးကိုကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးနေ့ကိုယူနိုင်ပါသလား။ အချိန်ကာလသည်ကျွန်ုပ်တို့၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်ကွန်ဒုံးနှင့် ဆက်၍ မနေချင်ပါ။ သို့သော် c၊ ad + ကျွန်ုပ်၏လည်ပင်းတွင်ကြွက်နို့ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်းသာရှိသည်။ မီးလောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ယားယံခြင်းသို့မဟုတ်ဘာမှမရှိပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် HPV သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် HPV ၏ကြော်ငြာ + ဖြစ်နိုင်သည်။ Ayudenem x fa k နက်ဖြန်နေ့၌ငါဆေးပြားဝယ်သည်နှင့်ကီလိုမီတာအကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာလုပ်စရာမလိုဘဲသူတို့ကိုမသောက်ချင်ပါ။
ငါတို့ဆက်ဆံရေးအတွက်ပိုကောင်းတယ် .. ဒါကငါတစ်ယောက်တည်းယူတာပထမဆုံးအကြိမ်ပဲ
ဒါကြောင့်ယခု box ကိုအပေါ်ကပြောပါတယ်အဖြစ် ?? သို့မဟုတ်ပြaနာတစ်ခုရှိလိမ့်မည်
ဟဲလို၊ ကြည့်ပါ၊ စာချုပ်များကိုကျွန်ုပ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ၂ таблетကိုကျွန်တော်မေ့ပစ်လိုက်ပါတယ်။ စည်းမျဉ်း ၂ ခုအောက်မှာဒီလမှာဒီလမှာအိုင်တီကတည့်မတ်တဲ့အခါမှာအုပ်ချုပ်မှုကကျွန်တော့်ဆီကိုရောက်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်ဒီနည်းကနည်းနည်းနည်းနေသေးတယ်။ ကန်ထရိုက်စာချုပ်များ၊ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်သာမန်အားဖြင့်နိမ့်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုသည်မှာမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကကျွန်ုပ်၏ ၀ မ်းဗိုက်နှင့်နာကျင်မှုခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုမျှော်လင့်ပါသည်။
ငါ belara ယူပြီးငါနောက်တစ်နေ့ငါဆက်ပြောသည်တစ်ခုတည်းသောသာလျှင်ငါသတ္တမ Passya ထံမှယူ။ မေ့လျော့မေ့သွား။ ငါအန္တရာယ်မရှိဘဲအကာအကွယ်မရှိဘဲထပ်မံဆက်ဆံရေးရနိုင်မလား? သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်နောက်လကို စတင်၍ စတင်သင့်သနည်း။
ဟယ်လို! ငါ Diva ကိုသုံးနှစ်ဆက်တိုက် antioconceptive ယူပြီးသုံးလအကြာမှာငါစိတ်ပူမိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လကငါဟာဆေးလုံးလေးနည်းနည်းသောက်ပြီးနှစ်ခုကိုမေ့သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါပြန်ခေါ်သွားတယ်။ နောက်လတွင်ကျွန်ုပ်သည်အရာအားလုံးကိုမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အချိန်ကာလကြာပြီးနောက်မှာကျွန်ုပ်သည်နှစ်တို။ ပိုမိုအညိုရောင်သွေးထွက်များလာပြီးနောက်ဆုံးတွင်သွေးထွက်ခဲ့သည်။ အခုတော့ငါလာဖို့ ၄ ရက်လောက်ရှိပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ညမှာနည်းနည်းငုံးတွေနဲ့တူတယ်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သနည်း၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ပါသလား။ ယခုလကျွန်ုပ်ရာသီစက်ဝန်းလည်ပတ်စဉ်လည်ချောင်းနာရောဂါကူးစက်ခဲ့ပြီး ၆ ရက်ကြာ Optamox duo3gr ဟုခေါ်သောအားကောင်းသည့်ဆေးကိုသောက်ခဲ့သည်။ သွေးထွက်အားဖြင့်လူတစ် ဦး ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်သလဲ မင်းကိုမကြာခင်မှာအကြံပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ၂၁ အစား ၂ ခုထက်ပိုသောကလေးမွေးနှုန်းကိုသောက်ခဲ့သည်။ ၂၃ ကျွန်ုပ်သည်အရေးကြီးသောအစည်းအဝေးကျင်းပချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကာလကိုနှောင့်နှေးစေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကုန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်ရှက်ရွံ့ခြင်းမရှိလိုသော်လည်းကျွန်ုပ်စတင်ခဲ့သည်မှာသံသယရှိသည်။ နောက်တနေ့သာမန်နေ့ဖြစ်လျှင် (သို့) ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးဆေးလုံးကိုသောက်ချိန်မှ (၈) ရက်အထိရေတွက်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၂၃ ဖြစ်သည်။ ငါရှုပ်ထွေးမှုများရှိသည်ငါ့ကိုကူညီပေးပါ။ ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ငါ femexil တားဆေးဆေးထိုးယူပြီးငါနောက်ဆုံးရာသီငါရာသီလာပြီ5ရက်အတွင်းပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုငါမေးချင်ခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေဆိုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Hello, ငါဆေးပြားများနောက်ဆုံးလကြာယူ, ငါ 21 ရက်သောကြာနေ့တွင်အဆုံးသတ်နှင့်တနင်္လာနေ့တွင်ငါပြီးခဲ့သည့်ကာလကထပ်မံ,
၂။ နံနက်ခင်း၌ငါယူခဲ့သောကာလ၏ ၄ ရက်သည်အလုပ်မလုပ်လျှင်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်လော (ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယအယူသည်)
ငါကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆေးပြားကိုသောက်နေပြီ။ ပုံမှန်အရက်ကိုသောက်နိုင်သလား၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟယ်လို! ငါ Belara ကိုငါယူနေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါဒုတိယသေတ္တာကိုအတိအကျပြီးအောင်လုပ်နေတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကငါဟာအန်ဂျနာနှင့်ဖျားနာခြင်းနှင့်အခြားသူများကိုဖျားနာခြင်းနှင့်ဆရာဝန်ကငါ့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုယူတာ၊ လျှော့ချတာပြောနေတာ paracetamol နဲ့ amoxicillin ကငါ့ကိုပို့လိုက်တယ်။ သန္ဓေတားဆေး pastiyas ဒါပေမယ့် ၂ ရက်ကြာမှငါကယားယံတာကိုသတိပြုမိပြီးအညစ်အကြေးကအဖြူနဲ့အထူရှိတယ်။ အနံ့မရပေမယ့်ငါနေမကောင်းဖြစ်တာ၊ amoxicillin သောက်တာလား၊ ငါကာကွယ်နိုင်ပြီးမှိုကိုဖမ်းနိုင်ပြီလားလို့ငါမေးချင်လား။ ဘာကြောင့်ထွက်လာရတာလဲမသိဘူး။ ဒါပေမယ့် NUVARRIN လက်စွပ်နဲ့ငါမှို ၂ ကြိမ်ထွက်လာပြီးဆူညံသံကအရမ်းစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတယ် !! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိနေသည်။ ဤကာလအတွင်းသန္ဓေတားဆေးကိုစတင်သောက်ခဲ့သည်။ ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်သည်ကွန်ဒုံးမရှိဘဲတစ်ချိန်တည်းတွင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကာလကိုအဆုံးသတ်နေပြီဖြစ်သော်လည်းကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်ကြောက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တွင်ကိုယ်ဝန်ရှိသည်၊ မရှိသည်ရှိသော်ကျွန်ုပ်သည်နောက်လာမည့်အချိန်မတိုင်မီစောင့်ဆိုင်းရပါမည်လား။ အခုသိဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိရင်သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမေးမြန်းမှုသည်အောက်ပါဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် (၃၅) နှစ် (ကျွန်ုပ်သည်ဟဟားဟားကိုပြသခြင်းမရှိသော်လည်း) ကျွန်ုပ်အသက် (၃၇) နှစ်ဖြစ်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် (၂၇) နှစ်အရွယ်တွင် trigynovin ကိုသောက်သုံးနေခဲ့ရပါသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါနည်းနည်းလေးလံလာလို့ပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါမသောက်ခင်မှာအရမ်းပိန်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသောက်တာကိုရပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့သွားမှာလား၊ အရည်တွေကိုထိန်းထားတာကိုရပ်တန့်သွားမှာလား၊ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
မင်္ဂလာပါ ... ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြားများကိုလပေါင်းများစွာသောက်ခဲ့ဖူးပြီး၊ အောက်တိုဘာလလတွင်ကျွန်ုပ်၏ရာသီလာခြင်းပtheိဇီဝဆေးများကိုသောက်ပြီးသောအခါသွားများသည်ရောဂါကူးစက်မှုအတွက်ပantibိဇီဝဆေးများကိုသောက်သုံးခဲ့ရသည်။ ဆေးသေတ္တာမပြီးမှီသွေးထွက်လွန်သည့်ရက်သတ္တပတ်နှင့်နောက်အပတ်များတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ငါသူတို့ဆေးပေးတဲ့ဆေးတွေကိုဆက်သောက်နေတုန်းပြagoနာကလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်ကငါကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်စရာမလိုဘဲငါ့ရဲ့ရည်းစားနဲ့အတူရှိနေခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့သည့်လကပantibိဇီဝဆေးကိုသောက်သုံးခြင်းကြောင့်၊ ငါကိုယ်ဝန်ရှိကောင်းရှိမယ်။
ဟယ်လို! ကျနော့်မေးခွန်းက၊ ငါကတစ်နှစ်သောက်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်ပြီးခဲ့သည့်လကငါပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ရာသီလာပြီးနောက် ၅ ရက်အကြာမှာငါသောက်တော့မယ်။ ငါကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပြီလား
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Venisse ဆေးထိုးဆေးကိုကျွန်ုပ်ယူသောပထမဆုံးကာလဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာမှာကျွန်ုပ်သောက်ခဲ့သောဒုတိယနေ့တွင်၊ ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကာလကိုဖြတ်တောက်သည်၊ ပုံမှန်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏မီးယပ်အထူးကုသည်ဤအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်အားဘာမှမပြောခဲ့ပါ။
ဟယ်လို!! ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသောဆေးများသောက်ခြင်းကသင့်ကိုအဆီဖြစ်စေပြီးသင်၏လိင်ဆန္ဒကိုလျော့နည်းစေမလားကျွန်ုပ်သိရန်လိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Dulce Maria အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏တတိယအရည်ကြည်ဖုတွင်ရှိနေသည်။ ဒုတိယပတ်တွင်တစ်ရက် ၀ မ်းလျှော။ ၅ နာရီခန့်အကြာတွင် (နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မပေးရန်သတိပြုပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားဆေးလုံးတစ်လုံးကိုသောက်လိုက်သည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့လျှင် ၂၁ ကြိမ်ဆေးထိုးပြီးပါပြီ။ , ငါအခြား box ကိုဝယ်ခြင်းနှင့်ငါမလိုအပ်သောတယူရမည်, ah ငါ့နောက်ဆုံးဆက်ဆံရေးအကြောင်းကို3သို့မဟုတ်5ရက်အကြာနှင့်ဝမ်းလျှော 21 လွန်ခဲ့သောကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေးများကိုနှစ်အနည်းငယ်ကြာအောင်ထိန်းညှိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းယခုလတွင်၎င်းဆေးများကိုသောက်သုံးခြင်းမှအနားယူရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး၊ ငါအခုချိန်မှာငါ့အချိန်ကာလကိုလျှော့ချသင့်တယ်၊ ဒါကမလျှော့သေးဘူး၊ ငါမှာကိုယ်ဝန်မရှိဘူး၊ ဆေးတွေကိုပြန်လည်ချက်ချင်းစသောက်နိုင်တယ်။
ငါပထမသောက်ဆေးကိုသောက်လိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ ငါဘာလုပ်သင့်သလဲ။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ည ၈ နာရီတွင်အမြဲသောက်လေ့ရှိသောသန္ဓေတားဆေးကိုသောက်သုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ ၁၄ နာရီခန့်သောက်ပါ။ အကြံပြုသည်ထက် ၂ နာရီပိုပါသည်။ ပြနာကငါသည်ပထမဆုံးဆေးသောက်ချိန်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ။ ၃ ရက်လောက်သောက်ဖို့မေ့သွားတယ်။ ဒါကြောင့် 3th နေ့မှာငါရာသီလာတာ ... ငါ့မေးခွန်းက ... ငါအခြား box ကိုဘယ်အချိန်မှာစရမလဲ။ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ !
ငါဆေးလုံးကိုသောက်နေတာတစ်နှစ်ရှိပြီ၊ ကျန်တဲ့ရက်သတ္တပတ် ၃ ရက်၊ ၄ ရက်ကြာမှငါမသောက်တော့ဘူး၊ (ငါ့အချိန်ကုန်လာတဲ့အခါပထမဆေးလုံးနဲ့စတင်ခဲ့တယ်) ။
ငါတတိယသန္ဓေတားဆေးကိုပထမဆုံးသေတ္တာထဲကယူပြီးလိင်ဆက်ဆံပြီးပြီ။ ငါဟာကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိသလား။ ငါခဏစောင့်သင့်သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသင့်သလဲ
၂ နှစ်ကြာပြီးနောက်ကိုယ်ဝန်မတိုးဘဲဆေးထိုးခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်လတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်လိုသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်မည်သည့်အန္တရာယ်ရှိသနည်း။ ကျွန်ုပ်သည်လအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းသင့်သည်၊ ကလေးသည်ဓာတ်မြေသြဇာကျလျှင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချင်တယ်၊
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကိုမွေးပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာစတင်သောက်ခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံးဆေးလုံးကိုသေတ္တာတစ်ခုမှယူရန်မေ့ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းကိုတနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကျွန်ုပ်မယူခဲ့ပါ။ အစောပိုင်းမှနှောင်းပိုင်းအထိကျွန်တော်တနင်္လာနေ့ (အစောပိုင်း) တွင်မသောက်နိုင်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတနင်္လာနေ့ညတနင်္လာနေ့ည (သက်ဆိုင်ရာတစ်ခု) နဲ့တနင်္ဂနွေကိုငါယူပြီးအဲဒီတနင်္ဂနွေမှာငါသတိထားမိတယ်၊ ငါကိုယ်ဝန်ရနိုင်မလား။
မင်္ဂလာပါ၊ အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့တည်းတွင်ပင် ၂ လုံးလုံးမှားယွင်းစွာသောက်မိပါကသင့်အားမေးမြန်းလိုသည်သင်ဘာလုပ်သနည်း။ သူတို့ကို ဆက်၍ သင်သေတ္တာအဆုံးတွင်တစ်ခုပျောက်ဆုံးနေသည်သို့မဟုတ်နောက်တစ်နေ့တွင်ယင်းကိုဆက်မသောက်ဘဲထို နေ့မှစ၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အဖြေကိုစောင့်ပါ။
မင်္ဂလာပါကောင်းသောည၊ ကျွန်ုပ်၌ရှိသောရက် ၂၀ နှင့် ၂၁ ဆေးလုံးကိုမသောက်ပါက၊ မနက်ဖြန်အကွက် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကကျွန်ုပ်၏ xfa သင်၏အဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းပါကဘာဖြစ်မည်ကိုသိလိုခဲ့သည်။
ငါ ၂ ရက်အတန်း ၂ ပတ်တုန်းကဆေးပြား ၂ ပတ်ကိုယူဖို့မေ့နေတယ်၊ ​​တနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာနေ့မှာ။ အင်္ဂါနေ့တွင်မွန်းတည့်ချိန်၌သူတို့ကိုငါအတူတကွခေါ်သွားသည်။ ငါပREိသန္ဓေယူနိုင်သလား ??? ။ ငါပုံမှန်အတိုင်းယူအင်္ဂါနေ့ရဲ့ဆေးလုံး
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၈ လကကျွန်ုပ်တွင်ကလေးရှိခဲ့ပြီးယခုဆေးပြားကိုသောက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်နို ၀ င်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်အစွန်းအထင်းများရှိနေသေးသော်လည်းပုံမှန်ဖြစ်မနေကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကာလကိုဖြတ်တောက်သည့်အချိန်တွင်မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဆေးပြားများကိုစတင်သောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်စတင်လိင်ဆက်ဆံပြီး ၁၀ ရက်အကြာ ... ကျွန်ုပ်သည်ကြောက်လန့်နေပါသည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကာလကျဆင်းခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်သိလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုပါသည်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးယူခဲ့တဲ့ box ကိုစဉ်းစားမိတယ်၊ ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်တယ်။ မင်းရဲ့အဖြေတွေကိုသိချင်တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြားကို ၄ ရက်သောက်နေသည်မှာသံသယဖြစ်ဖွယ်နည်းနည်းမျှသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဝမ်းရောဂါဆေးပြားများကိုမသောက်မီမိနစ်ပိုင်းအတွင်းတွင်ဆေးလုံးကိုသောက်ပြီးသောအခါဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်၏သွေးထွက်သံယိုမှုကိုအမြန်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။ မရှိ (ပြီးခဲ့သည့်ညမှ စ၍ မည်သည့်အရာမျှမထွန်းကားပါနှင့်။ ) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါငါဒုတိယနေ့နီးပါးသန္ဓေတားဆေးကိုစတင်သောက်ခဲ့တယ်၊ နံနက် ၁၁ နာရီမှာတစ်ရက်ချွတ်ပြီးမနက် ၉ နာရီဝန်းကျင်မှာတစ်နေ့သောက်လိုက်တယ်၊ အဲ့ဒီမှာငါအဲဒီမှာယူလာတယ်။
၂ ပတ်အကြာငါဆေးကိုစတင်သောက်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါ့ရဲ့ကာလဟာအမြဲတမ်းပုံမှန်မဟုတ်ဘဲဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ၄ ရက် ၅ ရက်လောက်ကြာတယ်။ ငါသုတ်ဆေးကိုဆက်သောက်နေတယ်။ သူတို့ကသွေးစက်တွေဖြစ်တယ်။ စိုးရိမ်စရာတစ်ခုခုပုံမှန်လား။
Maira၊ မင်းရဲ့အချိန်ကာလကမင်းမရောက်သေးပေမဲ့သင်ဆေးသောက်ရမယ့်နေ့ကိုသင်စတင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့ပုံမှန်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ၊ ကျွန်ုပ်၏မီးယပ်အထူးကုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆေးသောက်ရန်ပြောခဲ့သည် အချိန်ကာလဟာရုတ်တရက်တည်ငြိမ်သွားတယ်။ ငါဆေးသောက်ပြီးတနေ့တည်းမှာပဲ။ ယုံကြည်မှုနှင့်အတူတိတ်ဆိတ်လုပ်ပါ။
hello maira အားပြန်ပြောပါ
ငါသန္ဓေတားဆေးကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးစပြီးစတင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာငါပထမရာသီဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုငါကနောက်တစ်နေ့ဆေးလုံးနဲ့သွေးထွက်တာပဲလို့ထင်တယ်။ သူတို့ကဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ၊ ငါရာသီလာခြင်းကိုစောင့်နေစဉ်အနားယူသည့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းလိင်ဆက်ဆံလျှင်ငါ၌ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခြေရှိမရှိသိလိုပါသလား။ အင်္ဂလန် ၂၃ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ ၂၃ ရက်နေ့မှာငါဆေးသောက်ပြီးမှငါမနက် ၂၅ နာရီမှာလိင်ဆက်ဆံခဲ့ရတယ်။ ဒီနေ့ထိငါ့အချိန်ရောက်နေပြီလား !!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်ဘဲလိင်ဆက်ဆံပြီး ၂ ပတ်ကြာအောင်ဘုရားသခင့်ဆေးတိုက်ဆေးသောက်ပြီးတစ်နေ့တွင် ၄ င်းဆေးများကိုကျွန်ုပ်ဆေးသောက်ပြီးနောက်မနက် ၄ တန်ခန့်သောက်ရန်မေ့ခဲ့သည်။ ငါကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့လားသိချင်တယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေးကို ၇ နှစ်ကြာသောက်ခဲ့ပြီးပြီ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချင်သည်၊ ကျွန်ုပ်မသောက်သုံးခြင်းကိုမည်သို့ရပ်တန့်နိုင်မည်နည်း၊ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားတိုင်းသွေးထွက်စေသည့်အပြင်ကိုယ်ဝန်ရှိလိုပြီးကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ငါသန္ဓေတားဆေးကိုသုံးတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဆေးလုံးကိုသောက်လိုက်တာကဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးကသူတို့ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာသောက်ခြင်းဟာမကောင်းဘူးလို့ငါကြောက်တယ်။ ) ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ ငါသန္ဓေတားဆေးကိုခန့်မှန်းခြေ ၁၀ လလောက်သောက်ခဲ့ပြီးပြီ၊ လွန်ခဲ့တဲ့လကငါလေးရက်ကြာပantibိဇီဝဆေးတွေသောက်ခဲ့ရတယ်၊ diva သေတ္တာအသစ်စတင်မယ့်နေ့မှာပဲရပ်လိုက်တယ်၊ ကိုယ်ဝန်ကငါကြောက်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်ဘဲတားဆီးထားသော Diva box အသစ်ကိုမယူမီတစ်ရက်အလိုတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည့်အန္တရာယ်များရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏မေးမြန်းချက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ငါ yasminelle ကိုလွန်ခဲ့သော ၅ လကမှယူခဲ့သည်၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်အားအလွန်ဆိုးရွားစေသည့်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ လိင်စိတ်ဆန်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများလုံးဝမရှိခြင်းကြောင့်ငါစွန့်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သေတ္တာကိုပြီးဆုံးသွားသည်။ ဒီအပတ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ငါအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ရင်ငါသေတ္တာအသစ်တစ်ခုမစရရင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခြေရှိနေတယ်။ ??
ကျွန်ုပ်ဆေးသောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်သောက်ခြင်းကမည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသနည်း။ ကျွန်တော့်အချိန်ကာလကအဆင်ပြေတယ်၊ ​​ငါဆေးတွေကိုထပ်စသောက်တယ်
ကျွန်ုပ်၏မေးမြန်းချက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ငါသန္ဓေတားဆေးကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်စတင်သုံးစွဲခြင်းမှာအလွန်နည်းပါးပြီး ၂ ရက်မျှအရောင်ဆိုးခြင်းနှင့်ငါနည်းနည်းစိတ်ပူမိခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုစတင်သောက်သင့်သလား၊ ပိုပြီးအစွန်းအထင်းဖို့စောင့်ဆိုင်း?
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာသန္ဓေတားဆေးများကိုသောက်ပြီး ၄ နှစ်အကြာတွင်မည်သည့်အကာအကွယ်ပေးမည့်အချိန်ရှိသနည်း။
ကျွန်ုပ်သည် ၃ လတွင်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အားအကာအကွယ်ပေးနေဆဲလား။ ငါလက်ရှိဘာမှမယူတော့ဘူး
မင်္ဂလာပါ။ ငါထိုနေ့တွင်ပင်မှားယွင်းမှုဖြင့် ၂- ပါးသောက်သည်၊ တစ်ခုမှာအမဲတီရို၏သေတ္တာထဲတွင်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာနောက်တစ်ခုတွင်ပထမဖြစ်သည်။ အမှားဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏အလှည့်ဖြစ်ကြောင်းထိုနေ့တွင်ပင်လက်ခံခဲ့သည်။ ဆေးပြား ၂၈ လုံးယူလာပါကကျွန်ုပ်မည်သည့်ဆေးလုံးကိုသောက်ရမည်နည်း။ သို့မဟုတ်တစ်နေ့ပြီးတစ်ရက်သွားပြီးလျှင်နောက်တစ်ဆေးသောက်ပါကသင့်အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ရည်းစားနှင့်အကာအကွယ်မပါဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသော်လည်း၊ နောက်တစ်နေ့ဆေးလုံးအပြီးမနက်ခင်းတွင်ကျွန်ုပ်အတွင်း၌သုတ်ထုတ်ခြင်းကိုမပြုခဲ့ပါ။ နောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းသို့ပြန်ရောက်လာပြီးကိုယ်ထဲ၌သန္ဓေသားကိုထိုးဖောက်လာသည်။ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားဆေးလုံးတစ်စင်းကိုသောက်နိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၇ နှစ်ရှိပြီးတစ်လမပြည့်မီ၊ ကျွန်ုပ်သည် cyst အတွက်သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်သုံးနေပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံပြီး၊ ကိုယ်ဝန်ရရန်ကြောက်ရွံ့ပါသည်။ ဤသံသယကိုဖယ်ရှားပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ပါ ?????? ?
ဟိုင်း!! ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည် LOETTE တားဆေးကို ၂ နှစ်နီးပါးကြာအောင်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်သံသယရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့ကိုဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင်စတင်သောက်သင့်ပြီး၊ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်အထိကျွန်ုပ်မစတင်ခဲ့ပါ။ ကြိုတင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုမရှိပဲ၊ ၉ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိတနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုမယူခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ ၁၈ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြားများမှကုန်သွားပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကာလကိုလျှော့ချသင့်ပြီးလျှော့ချခြင်းမပြုသင့်ပါ ငါ့ကိုစိတ်ပူမိတယ်၊ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်မလား? နားလည်ပြီးနားလည်တဲ့သူဆီကအဖြေလိုတယ်။ အဖြေကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်ကူညီပေးပါ။ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့သော်လည်းသူသည်ကျွန်ုပ်အတွင်း၌သုတ်ရည်ထွက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ထိုဆေးပြားကိုကျွန်ုပ်မသောက်သော ၁၆ လတွင်ကျွန်ုပ်မသောက်ခဲ့ပါ၊ ငါ5အတွင်းနံနက် 16 နာရီမနက်မှာငါနှလုံးသားထဲမှာပဲ့တင်ထပ်နေတယ်။ ငါဆေးပြား ၂ လုံးကိုသောက်ပြီး glanique တချို့ယူလာတယ်။ ဒါပေမယ့်ညွှန်းကိန်းတွေပြီးသွားပြီလို့ငါမပြောတော့ဘူး။ သူတို့ဟာခေါင်းမူးနေပြီးခေါင်းမူးနေတယ်။ တခါတရံကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ဖွယ်ရှိသလား
ဟယ်လို။ ငါတိုင်ပင်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ် .. ငါ၌ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်ငါအချို့သောပantibိဇီဝဆေးဝါးများယူနေပါတယ်။ ငါဆင်းသွားခဲ့ရတယ်ငါဆင်းသွားပေမယ့်အနည်းငယ်သာ .. ငါ့မေးခွန်းဖြစ်ပါသည် .. ပantibိဇီဝဆေးပါဘူး ကြောင်းသြဇာလွှမ်းမိုး? ငါအနည်းငယ်ချွတ်တယ် ... ငါဒီကိစ္စမှာဘာလုပ်ရမလဲ။
မင်္ဂလာပါအပူတပြင်း၊ ဆေးလုံးနှစ်ခုဟာအရေးပေါ်ဆေးတွေဖြစ်တယ်၊ ဒါတွေကတော်တော်လေးအားကောင်းတယ်။ သင်ပြသနိုင်တဲ့အချက်တွေအရကိုယ်ဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆင်တူတဲ့လက္ခဏာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်၊ ပုံမှန်ထိရောက်မှုရှိတယ်၊ သင်လွှတ်လိုက်သည့်နာရီများ ... သူတို့ကိုခေါ်ယူပြီးနောက်သင်၏အုပ်ချုပ်မှုသည်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်ဆိုပါက .. ပုံမှန်ကာလမတိုင်မီ ၂ ပတ်ခန့်အလိုတွင် inf ကသင့်အားအစေခံမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်သည် ၂၁ နှစ်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏တည်ငြိမ်သောလက်တွဲဖော်ဖြစ်သောကြောင့်ကွန်ဆာဗေးတစ်ကိုစတင်သုံးစွဲရန်အမေကကျွန်ုပ်သည်ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မသက်မသာဖြစ်သဖြင့်အမေကအခိုင်အမာဆိုထားသည်။ ကျွန်တော့်အစ်မလိင်ဆက်ဆံတုန်းကသူကမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားပြီး Venisse ကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ ငါဆရာ ၀ န်ကိုမသွားချင်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုငါယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် (သူမကကျွန်မထက်တစ်နှစ်ငယ်တယ်) ။ သူမမှာရာသီလာခြင်း၏ပထမနေ့တွင်သူတို့ကိုခေါ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ သူကျွန်တော့်ဆီလာပြီးမနေ့ကပထမဆုံးခေါ်သွားတယ်ဆိုတာကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ၂၄ နာရီနီးပါးအကြာတွင်ယနေ့ကျွန်ုပ်ဘာမျှမတတ်၊ ငါတောင်စွန်းမရပါဘူး ဒါကြောင့်သူမတကယ်နေမကောင်းလား၊ ငါဆေးများကိုရပ်တန့်သို့မဟုတ်ဆက်လက်သငျ့သလော ငါနှစ်ရက်ကြာနားမလည်ရင်စိတ်ဆိုးရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ .. ?
မင်္ဂလာပါ၊ ငါသန္ဓေတားဆေးကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီး၊ ငါဆေးသစ်အသစ်ကိုစသောက်တဲ့နေ့မှာပဲလိင်ဆက်ဆံမှုပြုနိုင်မလားဆိုတာငါသိချင်တယ်၊ ငါကအန္တရာယ်ရှိသလား။ (သို့) ဆေးအသစ်တွေနဲ့ငါ့ခန်ဓာကိုယ်မပြည့်မှီအောင်စောင့်နေရမလား။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာဤအချက်ဖြစ်ပါသည်။ hoi ကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြား၏ဒုတိယသေတ္တာကိုစတင်ရပါမည်။ အချိန်ကာလကုန်ဆုံးသွားပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် ၂ ရက်အကြာတွင်စတင်သောက်ပါက .. သူတို့အတူတူအလုပ်လုပ်ပါက… သို့မဟုတ်ငါအခြားလတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ပါသလား .. ??
ဒါမှမဟုတ်နည်းစနစ်ကိုပြောင်းချင်ရင် ... လာမယ့်လအထိစောင့်ဆိုင်းရမယ် ... အချိန်ကာလရဲ့ပထမနေ့မှာ ... ဒါမှမဟုတ်ငါနည်းလမ်းအသစ်ကိုငါအစားထိုးနိုင် ... ဒီနေ့သောက်သင့်တယ် ... ဆေးလိပ်အစား .ocea ငါ patch ကိုတင်လိမ့်မယ် ...
မင်းကငါ့ကိုကူညီမယ်လို့မျှော်လင့်တယ် .. အရမ်းအရေးကြီးတယ် .. !
စနေနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်၊ စနေနေ့မှာ၊ ကျွန်မဆေးသောက်ဖို့မေ့သွားတယ်၊ အဲဒီညနဲ့တနင်္ဂနွေမှာလည်းငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ဆေးပြားကိုအချိန်မီမရရှိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ် ksa သို့ရောက်သောအခါညနေ ၆း၀၀ နာရီတွင်တစ်နာရီ၊ နောက်တစ်ခုကိုည ၇း၀၀ နာရီတွင်ပုံမှန်သောက်သုံးခဲ့ပါသည်။ ငါ၏အမေးခွန်း: ငါသူတို့ကိုယူကြပြီမဟုတ်သို့မဟုတ်ထိုလမ်းယူ။ အဘို့အဘယ်သူမျှမစွန့်စားမှု running ပါသလား
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာငါသည်ရာသီလာခြင်းဖြင့်ငါ့ကိုဂရုစိုက်ရန်ဆေးများကိုစတင်ယူပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုရပ်တန့်သွားစေပြီးလေးရက်ကြာပြီးနောက်ငါထပ်မံ abenir ထပ်ဖြစ်လာပြီးကိုယ်ဝန်မရနိုင်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၆ လခန့်ကသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အနည်းငယ်ဆေးများသောက်နေပြီးသူတို့ကိုရပ်လိုက်သည်။ ယခုသူတို့ကိုထပ်မံသောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ ထိုအချိန်မှစ၍ ပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တစ်ခါမျှမကြုံဖူးပါ။ လာချင်တယ်၊ ပြproblemနာကငါ့ရဲ့နောက်ဆုံးရာသီပေါ်လာပြီး ၁၅ ရက်အကြာမှာငါသူတို့ကိုစတင်ယူလာရင်အဲဒါကတစ်ခုခုကိုလွှမ်းမိုးတာလား။ ငါ့ကိုပြန်ပြောပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါပုံမှန်အားဖြင့် 22:30 p.m. မှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသောက်သည်
ငါတနင်္လာနေ့ကပုံမှန်အတိုင်းည ၁၀း၃၀ နာရီမှာယူမယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမေ့နေပြီး 22:30 မှာယူခဲ့တယ်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးချင်ပါသည်။ ကောင်းစွာရာသီလာခြင်း၏ပထမနေ့သန္ဓေတားဆေးကိုစတင်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကာလ ၅ ရက်အကြာတွင်အညိုရောင်တစ်ခုခုရရှိခြင်းမှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းကကျွန်ုပ်သည်ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်တွင်အဘယ်ကြောင့်ဆေးလုံးကိုစတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ဆေးပြားတံဆိပ်များကိုပြောင်းလဲချင်သည်လဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အတိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာဒီအကွက်၏အကွက်ကိုပြီးဆုံးသွားပြီ၊ ငါအခြားနေ့ကမှ yasmin နှင့်အတူစတင် ?? မင်းရဲ့တုန့်ပြန်မှုကိုငါတန်ဖိုးထားသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံးအနီရောင်ဆေးပြားဖြင့်စတင်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဟန်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲပုံမှန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရရှိနိုင်မလားသိလိုပါသလား။ သို့မဟုတ်သူတို့သည်အဝါရောင်ဆေးပြားများကဲ့သို့တူညီသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာသားဥအိမ် polysquitosis ရှိပြီးသုံးနှစ်ခွဲကြာအောင်ဆေးတွေကိုသောက်နေပြီးကိုယ်ဝန်ရချင်တဲ့နေ့အထိကျွန်တော်ဒီဆေးတွေကိုဆက်သောက်ရပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားသည်မိမိကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာကိုယ်ဝန်ရှိရန်ဖြစ်နိုင်ချေမှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏မီးယပ်အထူးကု၏အဆိုအရကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာမွေးဖွားနိုင်သော်လည်းသံသယ ရှိ၍ ကျွန်ုပ်သည်အခြားထင်မြင်ချက်တစ်ခုလိုချင်သည်။ ငါ့ကိုပြန်ပြောပါ ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!
ကျွန်တော့်မေးခွန်းကတော့ဒီဆေးကိုအင်္ဂါနေ့မှာယူဖို့မေ့သွားတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဆေးသောက်လိုက်တာ ၁၂ နာရီကျော်သွားပြီ။ ဆိုလိုတာကသောကြာနေ့မှာငါခုနစ်ရက်ရှိပြီကတည်းကငါဆေးမသောက်တော့ဘူး။ မေ့လျော့နေတဲ့သူနဲ့တခြားသူတွေကိုပုံမှန်သောက်ပြီးတဲ့အခါ ... ငါနောက်တစ်ခါထပ်ထည့်စရာမလိုပါဘူးဟုတ်တယ် ?? ?
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပြီးနောက်အခြားထင်မြင်ချက်ကိုလိုအပ်လိမ့်မည်။ သူကလာမယ့် ၆ ရက်အတွက်ယာစминဆေးတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့အကြံပြုပြီး၊ အလွန်ပြင်းထန်တဲ့သွေးထွက်သံယိုမှုနဲ့စတင်ပြီးနောက်တစ်ပတ်အကြာမှာမလုပ်နိုင်တာကိုဆက်လုပ်ဖို့အကြံပေးခဲ့တယ်။
ဟိုင်း Bianca၊ နေကောင်းလား
သင်တို့သည်ငါတို့၏ထင်မြင်ချက်သို့မဟုတ်အခြားအမျိုးသမီးများ၏သဘောထားချင်လျှင်အဆင်ပြေပါတယ်။ အကယ်၍ သင်၏မီးယပ်အထူးကုဆရာ ၀ န်ကဆေးများကိုဆိုင်းငံ့ထားရန်တိုက်တွန်းပါက၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်ပြီးသင်ပြုလုပ်သင့်သည်၊ ဤနည်းဖြင့်သွေးထွက်ခြင်းကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
မှတ်ချက်ပေးခြင်းနှင့် MujeresconEstilo.com ကိုဆက်ဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
vanessa cabrero ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြားကိုဆက်သောက်နေ ဦး မလားသိလိုသည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်ကာလသံသရာအလယ်တွင်ရှိနေပြီး၊ အစက်အပြောက်များ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်ဆက်လက်သောက်သုံးနေပါကသို့မဟုတ်ခုနစ်ရက်ကြာရက်ဖြုန်းနေမည်ကိုမသိပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
vanessa cabrero အားပြန်ပြောပါ
ဟိုင်း၊ ဆေးသောက်ဖို့မေ့သွားတယ်၊ အဲဒီညမှာပဲငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်၊ ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး၊ ငါမသောက်ခဲ့ဘူး၊ ၁၂ နာရီတောင်မပြည့်သေးဘူး။ အရင်ဆေးတွေမင်းအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိသလဲ။ သို့မဟုတ်ငါကအကြောင်းအဘယ်သို့ပြုသင့်သနည်း ငါသည်သင်တို့၏တုံ့ပြန်မှုကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ဟယ်လိုငါဗိုင်းရပ်စ်ကဒီအမှတ်တံဆိပ်ကထိရောက်မှုရှိမရှိသိချင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုငါသောက်နေတယ်။ ငါ့ကိုဖြေပါ ဦး ။
အကယ်၍ ငါသန္ဓေတားဆေးကိုပြောင်းလဲပြီးငါစတင်ပြီး ၁၀ ရက်အကြာတွင်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလော။
ငါအရမ်းစိုးရိမ်သောအလွန်အရေးတကြီးစုံစမ်းမှုရှိသည် ... ။ ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လကငါမွေးဖွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဆေးတွေကိုသောက်နေခဲ့ပေမယ့် $$ မရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကိုမသောက်တော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ထို့နောက်ငါ့ရာသီရာသီရောက်လာခဲ့သည်။ နှင့် ၄ ရက်သို့မဟုတ် ၅ ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်နိုင်ပါမည်လား ??? ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆေး ၂၈ လုံး၏သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်နေပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂၄ ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပြီး၊ ယနေ့ရာသီလာနေပြီ။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ဆက်လုပ်ရမည်ကိုသိလိုသည်၊ ထပ်တူတက်ဘလက်ကိုဆက်လက်သုံးစွဲသလား၊ တက်ဘလက်လား
ILOL ပါ ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို! ငါအရမ်းစိုးရိမ်တယ် ငါတနှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိကိုယ်ဝန်ဆောင်တုံးသောက်နေတယ်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သော ၂ လတာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်ဆေးများမသောက်မှီရာသီလာခြင်းကျဆင်းသွားပါသည်။ ဆရာဝန်ထံသွားသင့်ပါသလား။
လွန်ခဲ့သော ၂ လခန့်ကပင်ကျွန်ုပ်သည်အစာအာဟာရတစ်ခုစတင်ခဲ့သည်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ့အချိန်ကာလကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်မှာရောက်သင့်တယ်။ ငါမလာသေးဘူး .. ငါဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာငါရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်တစ်နေ့ငါဆေးလုံးကိုသောက်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကြာသပတေးနေ့မှာသူနဲ့ထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူရောက်လာတယ်။ ငါ့ကိုအထဲမှာ ... လားကိုယ်ဝန်ရှိပါ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၌ကျွန်ုပ်ရှိနေပြီး၊ ငါအတွင်း၌လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်သန္ဓေတည်ခြင်းရှိလျှင်ငါသန္ဓေတားဆေး ၁ ခုသောက်လျှင်မည်သည့်အခွင့်အလမ်းရှိသနည်း။
ဟယ်လိုကန့်ကွက်သူ ၂ ရက်ကိုပြန်မသွားတော့ပါဘူး။ မီးသင်္ဂြိုဟ်သူကကျွန်တော့်ကိုမေးခဲ့တယ်။ ALO Q ကတ်ကဒ်ကိုအပြီးသတ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံမှု ၇ ခုရှိပါသလား။ ၇ နှစ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်လား။
မင်္ဂလာပါ၊ မနေ့ကမနေ့ကကျွန်တော်ဟာဆေးမသောက်တော့တဲ့ဆေးတွေကိုမသောက်တော့ဘူး။ မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကဒီ ၇ ရက်အတွင်းမှာငါလိင်ဆက်ဆံရင် ၇ ရက်လောက်အနားယူမယ်၊ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်မယ်လို့ပြောတယ်။
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းကိုကြည့်ပါကကျွန်ုပ်သည်ဘယ်သောအခါမျှလိင်မဆက်ဆံပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၉ လကကျွန်ုပ်အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ၄ လလုံးလုံးကျွန်ုပ်ရှိခဲ့သည့်ပထမဆုံးယောက်ျားလေးနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်သူနှင့်အတူလက်တွဲပြီး ၅ လတွင်အခြားသူနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကောင်လေးနှင့်သူနှင့်ငါပေါင်းသင်းခဲ့သည်။ ငါသန္ဓေတားဆေးကိုစတင်သောက်ခဲ့ပြီး ၇ နှစ်ခန့်ကြာပြီးနောက်သူတို့နှင့်ခွဲခွာခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်ကာလသည်ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နှင့်မတ်လ ၅ ရက်တို့တွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီ၊ ငါရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ငါဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်နဲ့ငါ့ခွေးကငါမလာနိုင်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ နောက်သုံးရက်အကြာမှာငါဆက်သောက်ခဲ့တယ်။ အရမ်းကြောက်တယ်၊ ငါ့ကိုကူညီပေးပါ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်အိမ်မိုးပေါ်၌ရှိနေသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
မေးခွန်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်နေသည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်အဆိုပြုထားသောရည်မှန်းချက်ကိုမအောင်မြင်ခဲ့ပါ၊ ယခုငါသန္ဓေတားဆေးအမျိုးအစားနောက်တစ်မျိုးကိုယူလိုက်သည်၊ သူတို့လိုက်နာပါကတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်လာသည်။
မေးခွန်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်နေခြင်းဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ရည်ရွယ်ထားသည့်ရည်မှန်းချက်ကိုမအောင်မြင်ခဲ့ပါ၊ ယခုငါသန္ဓေတားဆေးနောက်တစ်မျိုးကိုယူလိုက်သည်။ သူတို့နောက်မှ Gyneplen အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးနှင့်နောက်မှလိုက်လျှင်ယခုဖြစ်ပျက်သည်။
ဟယ်လို! တနင်္ဂနွေနေ့ကကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်အတူရှိနေခဲ့သည် .. ကွန်ဒုံးကျိုးသွားသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်ဆရာ ၀ န်ထံချက်ချင်းသွားပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ပါပက်တာကိုခေါ်ယူခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာတနင်္လာနေ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ဖြစ်သည်။ ပက်စပက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်သတိမထားမိပါ။ ၅ မိနစ်တောင်မကြာသော kabesa xro နာကျင်မှုမှကျွန်ုပ်မည်သို့အဆိပ်သင့်သည်ကိုတစ်ခါတစ်ရံ .. သို့မဟုတ်ပြန်သွားလျှင် .. xro tmpoko lasts ကျွန်တော့်အတွက် ၅ မိနစ်တောင်မှမလာပါနဲ့သတိထားမိတာတောင်မှမပူပန်ပါဘူး .. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Pasya ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသတိမပြုမိရင်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်မလားမသိဘူး .. ဖြစ်နိုင်တယ် ???
1 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည် =)
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာဆေးသောက်ဖို့သုံးနှစ် (၃) နှစ်ရှိပါပြီ။ အစကတည်းကကျွန်တော်သံသရာအလယ်မှာဘယ်တော့မှသွေးထွက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါ။ ဒီနေ့ငါဖြစ်ပျက်နေပြီ၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်။ အနုတ်လက္ခဏာထွက်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုစမ်းသပ်မှု၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုငါထပ်ခါတလဲလဲမလုပ်သင့်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်ငါ့ရဲ့ပဲ့တင်သံကိုပေးဖို့မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားပါ။ \_ t
ကျေးဇူးပြု၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်အားမည်သို့ဖြေကြားရမည်ကိုသိလျှင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Diane ၃၅ ကိုအသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Diane 35 ၏ဒုတိယအပတ်တွင်ဖြစ်သည်။ ပြားများကြောင့် Optamox (amoxicillin နှင့် clavulanic acid) ကိုစတင်သောက်ခဲ့သည်။ နှစ်ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ပြီးသူသည်အပြင်သို့ထွက်သွားခဲ့သည်။ တနေ့ ၁၂ နာရီလျှင် ၂ ကြိမ်ထိုးသော“ Ovulol” ပြီးနောက်နေ့၏ဆေးကိုငါယူခဲ့သည်။ Optamox ဆေးကုသမှုခံယူပြီးငါးရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ထပ်မံလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးအိမ်တွင်းသို့ရောက်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Diane35 အနားယူချိန်တွင်၊ နောက်ဆုံးသန္ဓေတားဆေးကိုနောက်ဆုံးညမတိုင်မီသောက်သုံးခဲ့ပြီး ၃ ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မတ်လ ၂၅၊ ၂၀၀၉ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ။ သူသည်ကျွန်ုပ်ဆီသို့မလာသေးပါ၊ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ? ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိလား။ မည်သည့်အစီအမံများလုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်အဖြေကိုအမြန်ဆုံးစောင့်ဆိုင်းပါသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုဖြေနိုင်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီလဆေးလုံးကနေအနားယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ နောက်တစ်လထပ်ထပ်သောက်ချင်တယ်။ ပြproblemနာရှိလား၊ အခြားလမှာလိင်ဆက်ဆံလို့ရမလား ??? အန္တရာယ်ကင်းကင်းစွာ ??? အဖြေပေးသူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟိုင်းမာစယ်လာဘယ်လိုနေလဲ သငျသညျသန္ဓေတားဆေးဆေးများမှအနားယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သင်ကသူတို့ကိုပြီးဆုံးသည့်အခါ (ဆိုလိုသည်မှာ, သင်သေတ္တာအသစ်စတင်သင့်သောအခါ, မကျင့်) နှင့်သင်အနားယူရန်ဆုံးဖြတ်သည့်အချိန်ကာလအတွင်း, သင်ယူသင့်ပါတယ် သင်တစ် ဦး ကွန်ဒုံးသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းဖြစ်စေအခြားသန္ဓေတားနည်းနည်းလမ်းဖြင့်သင့်ကိုယ်သင်ဂရုစိုက်ပါ။ ဆေးတွေကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စေရန်ဆေးညွှန်းရေးထားသောမီးယပ်အထူးကုဆရာ ၀ န်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်လည်းကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်၍ MujeresconEstilo.com ကို ဆက်၍ ဖတ်ရှုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါနှစ်နှစ်ကျော်ဆေးတွေကိုသောက်နေတယ်၊ ​​မကြာသေးခင်ကငါအမှားလုပ်မိတယ်၊ ငါဆေးသောက်တော့ ၅ ရက်မပြည့်ဘူး၊ အဲဒီအချိန်မှာငါနဲ့ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်။ ငါ့မေးခွန်းကသူတို့ကိုဆက်လုပ်နေတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အခွင့်အလမ်းများကဘာတွေလဲ။
ငါဆေးကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာသောက်ခဲ့ပြီးမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်အချိန်သည်တစ်ပတ်မပြည့်မီ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်သောအခါစက္ကူကိုစွန်းထင်းစေခဲ့ပြီး ၁၁ ရက်တာပုံမှန်ဖြစ်သည်၊
ငါဆေးပြားကိုစတင်ကတည်းက ၉ ရက်ကြာဘုရားသခင့်ဆေးပြားကိုသောက်နေတယ်။ ငါသောက်ဖို့မေ့နေတယ်။ ငါ ၁၂ နာရီမတိုင်ခင်မှာသောက်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်တာလဲ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကြည့်၊ ငါခရီးသွားမယ်၊ မနက်ဖြန်မှာငါရည်းစားနဲ့တွေ့ဖို့ပြန်သွားမယ်။
သူတို့ကကျွန်တော့်ကို Miniginon လို့ခေါ်တဲ့ဆေးတချို့သောက်ဖို့အကြံပေးခဲ့ကြပေမယ့်သူကသူအုပ်ချုပ်မှုရဲ့ပထမဆုံးနေ့ကိုယူမယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါကမနက်ဖြန်ငါ့အချိန်ကာလကိုမသိဘူး၊ ၁၀ ရက်နေ့မှာငါဆေးသောက်မလားဆိုတာသိချင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါ kedar ကိုယ်ဝန်သွားသို့မဟုတ်သောကာလ၏နေ့၌မဟုတ်လော poirfas ငါ့ကိုကူညီပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းက yasminelle ကိုယူတာပါ၊ ဒါပေမယ့်ပထမ box ကိုကျွန်တော်ပြီးအောင်လုပ်ပြီးအချိန်ကိုမရရှိနိုင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တာကိုစိုးရိမ်ပြီးအခြားအတားအဆီးနည်းလမ်းကိုမသုံးခဲ့ပါဘူး။ ငါဖြစ်နိုင်ရင်သိချင်ပါတယ် ကိုယ်ဝန်ရှိပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်အကြောင်းပြန်ပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တစ် ဦး သည်မွေးဖွားမှုအတွက်တားဆီးဆေးများကိုတစ်နှစ်လောက်သောက်နေပြီဖြစ်သော်လည်းယခုနှစ်မတ်လတွင်ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုအနားမယူပါ။ (လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကွန်ဒုံးသုံးရန်သာကျွန်ုပ်၏မီးယပ်အထူးကုဆရာ ၀ န်၏အကြံပေးချက်) သို့သော်ကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ သူသည်အတွင်းပိုင်းသို့ရောက်သွားသည်၊ ယခုတွင်ငါသည်မူးဝြေခင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်းနှင့်အော့အန်ခြင်း၊ အစာအိမ်နာကျင်ခြင်းနှင့်ရောင်ခြင်းတို့ကိုအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရသော်လည်း၎င်းတို့သည် ဦး နှောက်အာရုံကြောအူမကြီးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးကုသမှုခံယူနေသည်မှာ ၁၅ ရက်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အော့အန်ခြင်းနှင့်ပျို့ချင်နေဆဲ ဖြစ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားပေးသည်။ ကျွန်တော့်အစာအိမ်ထဲ၌ဗိုက်ဆာနေခြင်းကပင်ကျွန်ုပ်အားအစာရေစာငတ်မွတ်မှုဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်ဖျားနာခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုခုစားရန်လိုသည်။ ဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်အိပ်မောကျခြင်းသို့မဟုတ်နံနက်ယံ၌ထသောအခါ ပို၍ ဖြစ်တတ်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်မလား ????? ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါသလား ???????
ငါဆေးပြားကိုရပ်တန့်ခြင်းအားဖြင့်ငါကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်လျှင်ငါဆေးဆိုင်မှာပြproblemနာတစ်ခုရှိပြီးငါယူသောတစ်ဝက် box ကိုမေလသည်အထိကြာရှည်ဖို့လိုသည်ငါသိလိုချင်တယ်, ငါပိုမိုဝယ်သည်အထိငါကသူတို့ကိုယူ။ ရပ်တန့်နိုင်လျှင်သိရန်လိုသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုမစိုက်ဘူးငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီး me.resp ပေးပါ
ငါတစ်လမွေးဖွားမှုအတွက်တားဆီးနိုင်သည့်ဆေးများကိုသောက်ပြီးတစ်ပတ်အကြာတွင်အလွန်ပြင်းထန်သောခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အော့အန်ခြင်းပင်စတင်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်သာဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ resondamme
လူတစ်ယောက်သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဆေးပြားကိုသောက်နေစဉ် (ကျွန်ုပ်၏နေရာတွင်ကစားနိုင်သည့် DC) နှင့်အချိန်နှင့်အလုပ်များမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဆေးပြားကိုရရန်ဆရာ ၀ န်သို့မသွားနိုင်သည့်အခါမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုသိလိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ရည်းစားကသူတို့အတွက်ကျွန်ုပ်ဝယ်ခဲ့ရသည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုအခြားတစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်၊ သူတို့ကကစားဟန်တူတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့က ၂၁ လုံးယူလာတယ်။ ငါယူခဲ့တဲ့သူ ၂၈ ယူလာတယ်။ (သူတို့ကမကျန်ဘူး။ ) ဆေးတွေကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိသလား။ ဒီတစ်ခါလည်းမေးခွန်းမိုက်မဲ ??? ဒါပေမယ့်ငါသိထားရမှာကငါ့ရဲ့လေ့လာမှုကိုမထိခိုက်စေချင်လို့လား။
the anulette CD သည်ကစားကွင်းတစ်ခုတည်းနှင့်သာတူပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဆရာ ၀ န်သို့မသွားနိုင်ပါ၊
တစ် ဦး ကအစဉ်အလာအစဉ်အတွင်းမသတိမထားမိဘဲခံစားမိသောအခါကျွန်ုပ်၏ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုသည် .. ထူးခြားသောအရာများသည်သားအိမ်နာကျင်မှုများ၌ဖြစ်ပျက်နေသော .. နှင့်ရှားပါးသောအရာများဖြစ်သည်။
အဲ့ဒါဘာလဲ?? ... ဤအရာတို့သည်ငါ့ ဦး ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးသွားသောအရာ ... သို့မဟုတ်ငါ့ EXPARTNER သည်တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဟာတစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့သည် .. သူသည်မသန်မစွမ်းဖြစ်နိုင်သလားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ဤအကြောင်းကိုအမြဲတမ်းတွေးတောနေခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်ကိုပြောပါ ...
ငါ DOCTOR ရဲ့ထောက်ခံချက်မပါဘဲဆေးပြားကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲငါအူလပ်ဆယ်လ်စီကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်မွေးနေ့ကကျွန်တော့်ကိုဝယ်ယူနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီ CD ကဒီတစ်ခုလုံးကဒီလုံးလုံးမတူတဲ့ CD တစ်လုံးတည်းကအူတောင့်သဲ ၂၁ လုံးယူလာတယ်။ OR သူတို့ကအူလွမ်တီ CD ကိုရပြီလား၊ တကယ်လို့ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပြောပြပေးပါ။
ငါဆေးများပြီးပြီနီးပါး3နှစ်ကအမြဲတမ်းတူညီ ... ယခုငါသူတို့ကိုတစ်ခုတည်းသောပြောင်းလဲပစ်ဒီလအတွက်သူတို့တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပျက်ထင်ကြ !!! PLIISSS!
ကျွန်ုပ်သည်မီးယပ်အထူးကုဆရာ ၀ န်ကြီးထံရောက်ရှိပြီးဆေးစတင်သောက်ရန်ဆေးသောက်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သောက်ရန်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ - ရာသီလာခြင်း၏ပထမနေ့ကိုပထမအကြိမ်သောက်ပြီးနောက်၊ ဆက်ပြီးသွေးထွက်နေသလား၊ ဒါမှမဟုတ်နောက်လမကုန်ခင်အထိပျောက်ဆုံးသွားပြီလား၊ နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ - ဆေးသောက်ပြီးပထမလမှာငါသန္ဓေတားဆေးနည်းကိုသုံးသင့်သလား။
ဟိုင်းအေနာနေကောင်းလား သင်၏မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်သည်သင်၏ရာသီလာခြင်း၏ပထမနေ့တွင်ဆေးများကိုစတင်သောက်သုံးရမည်။ ထိုအချိန်ကာလသည်အခြားသူများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ကြာရှည်ခံမည့်အားသာချက်နှင့်အတူဖြစ်သည်။ သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်သည့်ပထမလတွင်၊ သန္ဓေတားနည်းနောက်တစ်နည်း၊ ကွန်ဒုံးကိုသုံးသင့်သည်။ သန္ဓေတားဆေးသုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများကိုသင်၏မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကသင်ထုတ်ယူသည့်ဆေးလုံးနှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အညီဖြေဆိုပေးမည်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ ကံကောင်းပါစေ! ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် MujeresconEstilo.com !!
emmm hello၊ ငါက ၁၆ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်ဆေးတွေကိုတစ်ကြိမ်ယူဖို့လွယ်ကူအောင်လုပ်ပြီး ၈ diaz laz ကိုပြန်ထားခဲ့တယ်။
ငါစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်မှာကိုငါစိုးရိမ်တယ်ကျေးဇူးပြုပြီး zi မင်းငါ့ကိုမြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်ကူညီပေးနိုင်မလား z \_ t
Kuidenze နှင့် Muchaz Graziaz ...
ဟယ်လို! ငါ ၂၈ ရက်ကြာ mirelle တားဆေးကိုစတင်ယူခဲ့တယ်။ ဒါကငါယူတဲ့ပထမဆုံးသေတ္တာပါ။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမလှုပ်မရှားဖြစ်နေတဲ့ဆေးလုံးကိုငါသောက်လိုက်တယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံတာကိုငါကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်တယ်၊ မလှုပ်မရှားဆေးပြားကိုသောက်ခြင်း။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုဖြေဆိုရန်လိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးလုံးကိုအချိန်အတော်ကြာယူပြီးသောကြာနေ့များ၌စတင်ခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့တွင်ဘာကြောင့်စတင်ခဲ့တာလဲမသိပါ၊ တစ်ခုခုဖြစ်ပျက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြားအသစ်တစ်လုံးနှင့်စတင်သောအခါ ၂ လလုံးလုံးသန္ဓေတားဆေးကိုမသောက်လျှင်မည်သို့လုပ်နိုင်သည်နည်း။ ကျွန်ုပ်မည်သည့်နေ့ကိုစတင်သင့်သနည်း ???????????????
ola pz io ငါလုပ်နိုင်တာကိုwantပြီ ၂၆ ရက်မှာတွေ့ရမယ်
ဒီနေ့ငါမနက် ၉း၀၀ မှာပထမဆုံးဆေးကိုယူတယ်
ထိုအခါငါ ak hrs ငါသိလိုသည်အခြားတ ဦး တည်းယူသင့်သလဲ
တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး x fa
Elitmar Serafin ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ငါလိင်ဆက်ဆံသည့်နေ့၌ငါနံနက်ယံ၌သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေမတိုင်မှီ
Elitmar Serafin အားပြန်ပြောပါ
ဟယ်လို , ! ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ ရှိပါပြီ။ မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်က gyneplen ကိုဝက်ခြံဖြစ်စေရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ သို့သော်ငါရိက္ခာခွဲထားလျှင်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်လား၊ သို့မဟုတ်၎င်းသည်ငါ့ကိုကိုယ်ဝန်မှကာကွယ်သည့်ဆေးလုံးဖြင့်သာလျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည် gyneplen ကိုတစ်လခန့်သောက်သုံးနေခြင်းကိုသိလိုသည်။ xaooo နမ်းဖြေဆိုပါ
ဟိုင်း၊ ငါစိတ်ပူမိတယ်၊ ငါအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံတယ်၊ ညနေ ၂၅ ရက်နေ့မှာရာသီလာခြင်း၊ လာမည့်လ၏ဒုတိယနေ့မှာဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်။ ငါ Plan "B" ဆေးပြားကိုချက်ချင်းသောက်လိုက်တယ်။ ၁၂ နာရီမှာအတိအကျယူပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ၁၇ နာရီမှာယူရင်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိသလား။ ညွှန်ပြပြီးနောက် 25 နာရီဒုတိယဆေးပြားကိုယူပြီးလျှင်။
မင်္ဂလာပါ။ ငါကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်ကြောက်သည်။ ငါမတိုင်မီ ၁၂ ရက်အလိုတွင်အညိုရောင်သွေးထွက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုဖြေဆိုနိုင်လျှင်, ငါကတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်
ဟိုင်း၊ မေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးလုံးအားလုံးကိုအချိန်မီမယူပါ။ ငါသူတို့ကို 10:00 နာရီမှာစတင်ခေါ်သွားတယ်။ အဲဒီနောက်ငါအမှားမှားပြီးငါအရင်ယူပြီး ၁၂ နာရီနာရီအကြာမှာယူခဲ့တယ်။ ပြီးတော့အဲဒီလမှာပဲကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကိုငါမပြီးသေးဘူး၊ ငါကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိသလား။ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ပြီးသားမှစ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဂုဏ်ယူပါတယ်!
ငါ diane35 ကိုနေ့စဉ်4လကြာသောက်ပြီးငါသုံးလပတ်လုံးငါဘုရားကျောင်းမှာခေါင်းကိုက်နေတယ်။ ငါဆေးတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာလား။ အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုလိုတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Hello Keria, ကွန်ဒုံးမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံဖို့ဆေးတွေကိုစတင်သောက်တော့တာနဲ့ဘယ်လောက်ကြာကြာစောင့်ရမလဲသိလား။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကငါ့ကိုအဖြေပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါ ၁၀ နှစ်လောက်သောက်နေတယ်။ ငါကိုယ်ဝန်ရချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ ၂ လလုံးလုံးမမှန်မကန်ဖြစ်လို့ ၄ လလောက်ငါဆေးထိုးလိုက်တယ်။ ဒါကပုံမှန်လား ??? တစ်စုံတစ်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား ???
မေလ ၁ ရက်၊ ၂၀၀၉ တွင်မွေးဖွားမှုအတွက်တားဆီးဆေးများကိုကျွန်ုပ်စတင်သောက်ခဲ့သည်။ နေ့ ၁၂ ရက်တွင်နောက်ဆုံးသောက်သောဆေးကိုကျွန်ုပ်သောက်ခဲ့သည်
ဟယ်လို! ငါအဝေးပြေးရက်သတ္တပတ်၏7ရက်နေ့တွင် absentminded ဆေးလုံးကိုယူပြီးခဲ့ကြသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ စံပယ်ဆေး၏ထိရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်သံသယဝင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မေလ ၈ ရက်နေ့၌ကွန်ဒုံးမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည့် ၁၃ လမှ စတင်၍ ၁၃ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိကျွန်ုပ်အရက်ကိုသောက်ခဲ့သည်။ ငါပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်ပြီးကတည်းကအလယ်အလတ်ပမာဏနည်းပြီးအော့အန်ခြင်းမရှိသဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခြေရှိပါသလား။
တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု, ငါနောက်ဆုံးဆေးလုံးကိုယူပြီးငါလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်လျှင်, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိသိရန်လိုခဲ့သည်။
paola lischetti ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည် - လွန်ခဲ့သော ၁ လကကျွန်ုပ်သည် ၁၅ လအရွယ်ကလေးငယ်နို့တိုက်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ကာမီနီဖillကိုယူခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်၏မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကကျွန်ုပ်အတွက်သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းနှင့်အတူပထမ ၃ ပတ်အတွင်း tmb c ကွန်ဒုံးကိုဂရုစိုက်ပါ။ 1/15 မှာငါလာခဲ့ရတယ်၊ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့ကွန်ဒုံးမရှိဘဲသုံးရက်အကြာတွင်သူမအပြင်ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါမလာမီသုံးရက်အလို၌ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။
paola lischetti အားပြန်ပြောပါ
ဂလော်ဒီယာ villarreal ဟုသူကပြောသည်
ဟဲလို, ငါနှစ်ပေါင်းများစွာ PILDORA နှင့်အတူစီစဉ်ထားသည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်, ငါယုံကြည်မှုကြောင့်ငါယူ။2ထိုနေ့သောနေ့မလိုအပ်ချက်မရှိဘဲ, ဘယ်လိုငါယခုမှစ။ သူနာပြုဆရာမတစ်ယောက်ကဘာမှမပါ ၀ င်ပဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ဆရာဝန်ကအခြားတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုဒီနေ့သွားခွင့်မပြုပါဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်လုပ်သင့်သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။
claudia villarreal အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါသူကျွန်တော့်ဆီရောက်လာတဲ့ပထမနေ့ကဆေးပြားတွေနဲ့ပါ။ ငါ့ကိုတနင်္လာနေ့နဲ့သောကြာ၊ စနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာသူတို့ကကျွန်တော့်ကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ဖွယ်ရှိပါသလား ကျေးဇူးပြု၍ အဖြေ !!!!
olaaa ကျွန်ုပ်သည်ဤဖိုရမ်တွင်အသစ် ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကကွန်ဒုံးကိုမီးရှို့ပြီးကျွန်ုပ်သည်ဒုတိယနေ့၌အနားယူသည့်ရက်သတ္တပတ်၌ရှိနေသောကြောင့်သူသည်ကွန်ဒုံးအတွင်း၌သုတ်ရည်ထွက်စေသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ကြောက်လန့်သည်။ ကိုယ်ဝန်ရှိသလား ကူညီကြပါ !!!
မင်္ဂလာပါ။ ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်သိပြီ။ ပထမဆုံး YASMIN (၂၈ လုံးတက်ဘလက်) ကိုစတင်ယူပြီး၊ ရာသီလာခြင်းသံသရာသည်ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင်ရှိနေပြီးထိုစားပွဲပေါ်မှာ ဆက်၍ သောက်ပြီးသည်နှင့်ငါတက်သွားသောအခါငါနောက်ထပ်တက်ဘလက်ကိုစတင်ယူသည်။ (သို့သော်ဤရာသီ၏ပထမနေ့မဟုတ်ပါ) ကျွန်ုပ်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိသလား။ ကျွန်ုပ်သည်တတိယအကြိမ်မည်သို့ယူရမည်နည်း။ တက်ဘလက်လား
ပြီးသားမှစ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် YASMIn (တက်ဘလက် ၂၈ လုံး) ကိုစတင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ရာသီလာခြင်းသံသရာဟာကျွန်တော့်ရှေ့မှာရှိနေပြီး၊ ဒီစားပွဲကိုဆက်ပြီးသောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးသွားရင်နောက်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်စတင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ရာသီလာခြင်း၏ပထမနေ့မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိသလား။
မင်္ဂလာပါကောင်းမွန်သောနေ့လည်ခင်း၊ ဆေးသောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းမေးခွန်းတစ်ခုအမြဲတမ်းရှိခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်ုပ်၏သံသရာ ၂၁ လုံးကိုပြီးဆုံးချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်ပေးသည့်အခါမအောင်မြင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာအခြားဆေးများမသုံးဘဲဆေးလုံးပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်သည်နောက်တစ်နေ့တွင်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုနိုင်ပါသလား။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး?
ဟယ်လို .. ငါဘယ်တော့မှဆေးတွေမသောက်ခဲ့ဘူး၊ သူတို့ကိုစတင်သောက်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူး။ မင်းကိုကူညီနိုင်ရင်ကျေးဇူးပြုပြီးငါမှာ ၂၁ တက်လက်တက်ဘလက်ရှိတယ်။
လွန်ခဲ့သော ၁၀ ရက်ကမည်သည့်အချိန်တွင်ငါရာသီလာခြင်းကိုရပ်ခဲ့သနည်း၊
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကအခြားဆေးပြားများ (vexa) ကိုသတ်မှတ်သော်လည်းသူတို့သည်အလွန်စျေးကြီးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်နိုင်ကြောင်းအမေကပြောပြသည်။ ကျွန်ုပ်ဆေးဆိုင်သို့သွားပြီးကစားနည်း cd တောင်းသည်။ ဘာမှမဖြစ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်ချင်တယ်
ငါ ၂ နှစ်လောက်သောက်နေတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လကငါကာလတာမရခဲ့ဘူး။ ငါပုံမှန်နေ့တိုင်းဆေးလုံးကိုယူတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါအရမ်းစိုးရိမ်တယ်။ ငါကိုယ်ဝန်ရပြီလား
ဟယ်လို! လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကငါဆေးသောက်ပြီးတာနဲ့ငါထပ်မသောက်တော့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကငါအပူချိန်အလွန်အကျွံတိုးလာတာ၊ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းချောင်းဆိုးတာ၊ ရင်သားနာတာ၊ မူးဝြေခင်း၊ Premenstrual, ဒါပေမယ့်ငါကဒီဆေးတွေကိုမသောက်တော့ဘူးလား၊
Diego Medina ဟုသူကပြောသည်
သွေးထွက်လွန်သည့်ဒုတိယ နေ့မှစ၍ ဆေးများကိုသောက်လျှင်ကော။
diego medina အားပြန်ကြားပါ
ငါ ၃ နှစ်လောက်သောက်နေပြီးနောက်တစ်နေ့မှာငါဆေးသောက်လိုက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုငါညဥ့်ဆောင်ပြီးအိပ်ခဲ့ရတယ်၊ အဲဒီညမှာငါမသောက်ခဲ့ဘူး၊ နောက်နေ့ငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပေမဲ့နောက်တစ်ခါငါသောက်ဖို့မေ့သွားတယ်၊ ၂၄ နာရီထက်မပိုတာနဲ့တူတယ်သူမမှာကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်လား။ နှုတ်ဆက်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်သည်မွေးဖွားနှုန်းကိုလေးလခန့်သောက်နေရပြီ၊ သူတို့ကို trolit ဟုခေါ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမှားကြီးကြီးမားမားလုပ်မိသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီနှင့်အရေးပေါ်တုန့်ပြန်မှုလိုအပ်သောကြောင့်အချိန်ဇယားများတွင်အမြဲသတိထားမိသည်။ ကျွန်ုပ်အမှားမှာကျွန်ုပ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ့ရဲ့ ၁၄ နှစ်သားအရွယ်ချစ်သူကောင်လေးဆိုလိုတာကငါ့ရဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲ။ ovulation ငါမှာသန္ဓေတားဆေး ၁၂ လုံးရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ဆေးလုံး ၂၁ တိုင်အောင်ဆက်သောက်တယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မမေးခွန်းကကိုယ်ဝန်ရနိုင်မလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအဖြေတစ်ခုပေးပါ ငါကြောက်လန့်တွေအများကြီးနှင့်အတူနှုတ်ဆက်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်၊ ကွန်ဒုံးကိုသုံးပြီးစစ်ဆေးတယ်၊ ဘာမှမထွက်လာဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါကိုယ် ၀ န်ကိုစစ်ဆေးတယ်၊ ဒါကအနှုတ်ထွက်လာတယ်၊ ရက်အနည်းငယ်အနည်းငယ်သွေးထွက်ပြီးနောက်ငါမှန်းဆမိလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ကာလကိုရရှိသည်။ ထို အချိန်မှစ၍ မီးယပ်အထူးကုသည်ဆံပင်နှင့်ဝက်ခြံတို့ကိုပို့ပေးသည့် gyneplen ကိုစတင်ယူသည်၊ သို့သော်ငါတစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ်သွေးထွက်နေဆဲ၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ နောက်တစ်နေ့မှာသူတို့ကကျွန်တော့်ရဲ့သားအိမ်မှာပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရပြီး၊ ငါဆေးပြားသေတ္တာကိုပြီးအောင်လုပ်တယ်၊ ငါဟာငါ့ကာလကိုလျှော့ချရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနည်းနည်းသွေးထွက်နေတုန်းပဲ၊ ပုံမှန်လား။ ငါကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်လား ??
ဟယ်လိုမေးခွန်းကလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကငါတားဆီးဆေးကိုသောက်တယ်ဆိုတာငါ ၇ ရက်ခွင့်ရက် ၂၁ လုံးအကွက်ပြီးသွားပြီ။ အချိန်ကအခုမလာသေးဘူး။ ၁၄ ရက်လုံးလုံးငါမသောက်ဘူး၊ ငါယူလို့ရလား။ နောက်တဖန်လား
မင်္ဂလာပါ၊ ဆေးယဉ်ပါးမှုပထမပထမလတွင်ရာသီသွေးမလာခြင်းသည်ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်သိလိုပါသည်။ ယခင်က depropovera ကိုကျွန်ုပ်စီစဉ်ခဲ့သည်။ ဆေးထိုးသည့်နေ့မှခြောက်ရက်ကြာသော်လည်းထို ၆ ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ချက်ချင်းစတင်ခဲ့သည်။ ဆေးလုံးနဲ့အမှန်တရားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မခင်ပွန်းနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ရင်၊ ကျွန်မကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်။ ငါအရမ်းစိတ်ပူမိတဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့အဖြေကိုသိချင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေး mirelle ကိုယူနေကြောင်းလွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကလွန်ခဲ့သောလကကျွန်ုပ်မေ့ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်၏ကာလသည်တစ်လလျှင်နှစ်လလာသည်။ မီးယပ်သားဖွားဆရာဝန်ကတစ်လ x x ထားရန်ပြောခဲ့သည် ငါ့ကိုဂရုစိုက်ပါ၊ ငါ ၁၅ ရက်မှာလာသင့်တယ်၊ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိမရှိသိချင်လား၊ ဒါမှမဟုတ်တစ်လလုံးလုံးဆေးတွေကိုချန်ထားခဲ့တာလားနောက်ကျလား။
တနင်္လာနေ့မှာအကာအကွယ်မရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးပြီ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသောက်ဖို့အစီအစဉ်ကိုငါသိချင်တယ်။ အချိန်ကာလကနောက်ကျမယ်၊ ဒီဆေးတွေရဲ့စားသုံးမှု x၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာပုံမှန်ဖြစ်တာလဲ။
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ။ ယခုလတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဆေးလုံးကိုသုံးရက်ကြာသောက်ခြင်းကိုမေ့လျော့ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်သြဂင်ဆေးထပ်ယူနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အချက်များမှာ ၁၅ ရက်ထက်နည်းသောကာလအတွင်း၊ ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆေးပြားအိတ်အသစ်နှင့် ထပ်မံ၍ ဘာဆက်လုပ်ရမည်နည်း
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ဆေးသောက်ပြီးနောက် ၄ ရက်အတွင်းအော့အန်ခြင်းကိုခံယူပြီးနောက်အခြားဆေးလုံးတစ်လုံးကိုသောက်လိုက်သည်။ ဆေးလုံးများမှတ်သားသည့်နေ့ရက်များသည်ယင်းတို့ကိုယူရန်အရေးကြီးပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်အဘယ်ကြောင့်လိင်ဆက်ဆံနေသနည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဆေးပြားများကိုသောက်နေသော်လည်းယခုလတွင်ကျွန်ုပ်သည်မေ့လျော့နေပြီး၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဆေးပြား ၄ လုံးခန့်ရှိပြီးကော်ဖီအရည်ကိုပပျောက်အောင်စတင်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ဝန်ရှိနေနိုင်သည်။
ငါဆေးသောက်နေတာ ၃ နှစ်ရှိပြီ၊ ဘယ်တုန်းကမှဆုံးရှုံးမှုမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒီတနင်္ဂနွေမတိုင်ခင်ငါဟာရာသီလာခြင်း (သို့) ဘဲဥပုံနာခြင်းနဲ့ဆင်တူတဲ့အစာအိမ်နာလိုဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရပြီး၊ ထိုအချိန်သည်တစ်ရက်မျှမဟုတ်ပါ၊ ဤတနင်္ဂနွေသည်ကျွန်ုပ်၏ကာလကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ ... ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်မိသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်ကူညီနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကိုလွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ကျော်ကငါတီထွင်ကြံဆသောဆေးများကိုသောက်သုံးခဲ့သည်။ သူတို့ကိုဆက်မသောက်တော့ပါ၊ ဤအချိန်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်အခြားသန္ဓေတားနည်းကိုမသုံးခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ဝန်မရခဲ့ပါ၊ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်မကြာခဏဆက်ဆံရေးမရှိကြပါ။ သို့သော်ကိုယ်ဝန်ရလိုပြီးလွန်ခဲ့သောအချိန်ကာလ ငါသောက်နေစဉ်အချိန်နှင့်သူမကိုယ်ဝန်မရသေးသည့်အချက်တို့အကြားဆက်နွယ်မှုရှိမရှိသိလိုသည်။
နှင့်ဒုတိယအကြောင်းတစ်ပါတ်အကြာ။ ငါ့ရင်သားတွေထဲမှာနာကျင်မှုတွေအများကြီးခံစားရတယ်၊ အမှန်တရားကတော့ငါကဆေးမသောက်ခင်ငါကာလမတိုင်ခင်တစ်ပါတ်အကြာမှာမကြာခဏဖြစ်ခဲ့တာ၊ ဒါပေမဲ့ငါသောက်နေချိန်မှာငါမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကငါ့အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ် ငါဆေးတွေကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီး Semama မှာလည်းငါကိုပိုပြီးလျှော့ချသင့်တယ်၊ တခါတလေငါအသည်းအသန်ခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလားမသေချာဘူးလားငါမသိဘူး။
အမှန်တရားကငါအရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်။ ငါ့ကိုကူညီပေးပါ။ မင်းကိုလမ်းပြမယ်ဆိုရင်ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့မှာသံသယတွေများနေလို့ငါ့ကိုဖြစ်ပျက်နေတာတွေဟာပုံမှန်လားဆိုတာမသိဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဆေးတွေကိုသောက်နေတယ်၊ ​​ငါသူတို့ကိုနှစ်ပတ်တာကြာပြီ။ တတိယပတ်ရဲ့ ၄ ရက်မြောက်နေ့မှာငါဟာငါ့ရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးသူဟာအတွင်းပိုင်းကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်။ ငါကိုယ်ဝန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိသိချင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၉ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဆေးပြား (Femiplus 19) ကိုသောက်နေပါပြီ၊ ရာသီလာခြင်း၏ပထမနေ့တွင်ပထမဆုံးသောက်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါသည်။ သူတို့ကိုငါနှစ်ပတ်ကြာမျိုချနေတယ်။ တတိယပတ်ရဲ့ ၄ ရက်မြောက်နေ့မှာငါဟာငါ့ရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးသူဟာအတွင်းပိုင်းကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်။ ငါကိုယ်ဝန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိသိချင်ပါတယ် သင့်တုန့်ပြန်မှုကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးစောင့်ဆိုင်းပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါဟာမင်းနဲ့အတူတူပဲ၊ ဘာဖြစ်တာလဲသိချင်တယ်။ နောက်ဆုံးသင်ပုံမှန်ကာလကိုရခဲ့ပြီလားဆေးလုံးအပြီးမနက်လား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိနေသည်။ သင်သည်ကျန်ဆေးများကိုစတင်သောက်သောအခါကွန်ဒုံးသို့မဟုတ်အခြားသန္ဓေတားနည်းကိုမသုံးပဲလိင်ဆက်ဆံမှုကိုကြောက်ရွံ့နိုင်သေးသလား။
ငါနို့တိုက်ကျွေးနေပြီးကြီးကြပ်မှုတစ်ခုတွင် CARMIN ဆေးလုံးပျောက်ဆုံးသွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့ကို ဆက်၍ သောက်နေပြီးဖြစ်သလော။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ? နောက်ထပ်ဆက်လုပ်? (သို့) တစ်လအနားယူပါသလား။ ဒါပေမယ့်မရှုပ်ပါဘူး။ အနားယူလျှင်ကျွန်ုပ်မည်သို့စတင်ရမည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ မေးခွန်းတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေးများ (microginon21) ကိုသောက်ပြီးပြီးချင်းဆေးပြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၇ ရက်ကြာအနားယူခဲ့ပြီးနောက်အခြားသေတ္တာတစ်လုံးနှင့် ဆက်၍ ကျွန်ုပ်၏ရာသီလာသည့်နေရာတွင်ကျန်တာများကိုမစောင့်ခဲ့ပါ။ လာ ငါဆက်လုပ်မယ်၊ ငါ့ဘဝကိုခေတ္တရပ်တန့်မသွားစေဘဲဆက်ပြီးငါဆက်လုပ်နိုင်မလားဆိုတာငါသိချင်တယ်။ မကြာခင်မင်းရဲ့တုန့်ပြန်မှုကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ရက်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ပူနေသောအကြီးအကျယ်သံသယကိုဖယ်ရှားလိုခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေးများကိုတစ်နှစ်နီးပါးယူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော်လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးကွန်ဒုံးနှင့်ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါ။ ၃ ရက်ကြာအသည်းကွဲတာတွေရှိခဲ့ရင်ကျွန်မကိုယ်ဝန်ရနိုင်မလား။ ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖြေကိုတကယ်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်
မင်္ဂလာပါဖလောရင့်, နေကောင်းလား ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်နေပြီးသင့်တွင်တည်ငြိမ်သောမိတ်ဖက်တစ် ဦး ရှိလျှင်ကွန်ဒုံးသုံးခြင်းဖြင့်သင့်ကိုယ်သင်ဂရုမစိုက်ပါနှင့်။ အလားတူစွာ၊ သင်သည်သင်၏မြေသြဇာကောင်းသောနေ့ရက်များတွင်လိင်ဆက်ဆံသည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊ ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိသိရန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သွေးစစ်ဆေးခြင်းသည်အကောင်းဆုံး (ထိုဝေဒနာကိုဖယ်ရှားရန်) အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၌ပျို့ချင်သည်ကသင်၏ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ ၎င်းသည်အစာခြေခြင်းပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Arlette သန္ဓေတားဆေးကိုခြောက်လကြာသောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ပုံမှန်ကာလကျဆင်းလာသော်လည်းဇွန်လ ၈ ရက်အတွက်ကျွန်ုပ်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပါပြီ။ ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖြေကိုအလွန်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။
Hello, ငါဇွန်လ၏လအတွင်းငါပုံမှန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအောက်, ငါမူကားနှောင့်အယှက်ငါသို့သော်ငါပြီးနောက်ငါအနည်းငယ်ယူပြီး, Q ငါထံမှယူ။ , ငါနှင့် 15 ရက်အတွင်းငါ၏အကြီးထွားမှုကျဆင်းသွားပေမယ့်နောက်ဆုံးအပတ်အစောပိုင်းက အသစ်သောအိတ်ဆောင် Q ၏ Pill တနင်္ဂနွေနေ့သို့သွားပေမယ့်ငါတ ဦး တည်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့်သောကြာနေ့၌ငါတ ဦး တည်းယူ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့်သောကြာနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တွင်တစ် ဦး ကိုယူ။ နောက်သို့ကျွန်ုပ်၏စည်းမျဉ်းကိုအပတ်တကျပြန်ဖွင့်သော်လည်း၎င်းသည်ဤမျှလောက်မကြီးပါ။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ Q ၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသလားဤကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်လား။ သင့်အဖြေအတွက်ငါမျှော်လင့်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆေးလုံးကိုပြီးအောင်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လာမယ့်အထုပ်ကိုစဖွင့်တော့မနေ့ကငါယူခဲ့တဲ့အငြင်းပွားမှုကြောင့်ငါ့ကိုကူညီပေးပါ
ကျွန်ုပ်သည်လက်ထပ်ပြီးခါအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးAprilပြီလနှောင်းပိုင်းတွင် FEMITRES ဟုခေါ်သောသန္ဓေတားဆေးပြား ၈၄ ခုနှင့် placebos ၇ ခုပါဝင်သည့်တားဆေးထိုးဆေးများကိုစတင်သောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် endometriosis ရှိပြီးသူတို့လိုချင်သောအရာသည်ကျွန်ုပ်၏ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချရန်ရာသီလာခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ endometriosis of သို့သော်နောက်ဆုံး ၂၈ ၏နောက်ဆုံးသေတ္တာတွင်ကျွန်ုပ်အနည်းငယ်သွေးထွက်ထွက်ပြီးနောက်ဆုံးအဖုအပိန့်၏ ၁၈ ရက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အနည်းငယ်ကြောက်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၅ ရက်ပြည့်နေပြီ၊ ငါရာသီလာခြင်းမဟုတ်တာ၊ ဒီပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းမတိုင်မီသွားကြဖို့တစ်ပါတ်။ ဘာဖြစ်တာလဲ? ဘာဖြစ်လို့လဲ ငါကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်လား ဒါမှမဟုတ်ကုသမှုအမျိုးအစားကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒီအပတ်မှာမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းဘာပြောတာလဲသိချင်တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ဒုတိယရာသီတွင်သင်ဆေးသောက်ပါကထိရောက်မှုရှိမရှိမေးမြန်းလိုသည်၊ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်စိုးရိမ်သည်၊ ဆေးသောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်လရာသီပေါ်လာခြင်းကိုဆက်လုပ်သင့်၊ မလုပ်သင့်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ဒါကြောင့် perservingly
မင်္ဂလာပါ၊ သုံးလကြာအောင်သန္ဓေတားဆေးကိုယူခဲ့တယ်။ Yasmin၊ ဇွန် ၁၈ ရက်ကစပြီးသူတို့ကိုငါစွန့်ခွာပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမလုပ်ဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်ဘဲကိုယ်ဝန်ရှိနေနိုင်ပြီ။ ကျေးဇူးပြု၍ တာ ၀ န်ယူပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးလုံးကိုတစ်လကြာသောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ရာသီသွေးလာချိန်တွင်၎င်းကိုဆက်လက်သောက်သင့်သလားသို့မဟုတ်စွန့်ခွာသင့်သလားဆိုတာသိလိုပါသည်။ ဟုတ်ပါသည် ၂၈ လုံးပါသောဆေးများ ...
ပြီးသားမှစ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
ငါသန္ဓေတားဆေးကိုသောက်နေတယ်၊ ​​ငါရာသီလာတာတစ်ပတ်နောက်ကျနေပြီ၊ သောက်ဆေးတွေနှောင့်နှေးတာပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်တာ၊ ငါနဲ့တစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး၊ ရှစ်လမှာပထမဆုံးအကြိမ်ငါဖြစ်ခဲ့တယ်
ကျွန်ုပ်သင့်အကူအညီလိုတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးစစ်ဆေးမှုတွင်ကျွန်ုပ်သည် ၆ မီလီမီတာအတွင်းပိုင်းရှိ fibroid ရှိကြောင်းပြောပြသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၉ လအတွင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်သားသမီးများမွေးခြင်းမှာအကြီးမြတ်ဆုံးဆန္ဒဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှား။ ကြောက်သည်။ သူတို့ကငါ့ကိုသန္ဓေတားဆေးတွေ၊ myoma မတိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါကြီးထွားလာတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါဇူလိုင် ၂၀ ရက်မှာဆေးစစ်ရုံဘဲအရမ်းကြောက်တယ်။ ကျေးဇူးပြု။ ကူညီပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ဆေးမသောက်မှီနံနက်ယံ၌ကိုယ်ဝန်မရှိဘဲနေလျှင်ဘာဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်သိချင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိမရှိသံသယဖြစ်မိပါကမည်သို့ဖြစ်သွားသနည်းကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်မပါဘဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးရှိခြင်းကြောင့်ဘာမျှမဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသေချာပါသည် အန risks တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ငါသူတို့ကိုယူခဲ့တယ်။ Espro answer xfa !!!
အမည်မသိ, ဘာမျှဖြစ်ပျက်။ စည်းကမ်းချက်သည်သင့်ရှေ့တွင်အနည်းငယ်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရဘာမှမဖြစ်လာပါ။
ငါ ၁၃ နာရီခွဲလောက်ဆေးလုံးကိုမေ့သွားတယ်။ ငါမှတ်မိတဲ့အခါငါယူလိုက်တယ်၊ နောက်ပုံမှန်ပုံမှန်အချိန်မှာယူလိုက်တဲ့နောက်တစ်ခု။
"Femexil" လို့ခေါ်တဲ့ဆေးတွေကကောင်းမလားသိချင်တယ်။ ငါပြန်လည်ပြုပြင်ချင်တယ်
အဘိဓါန် Lou ဟုသူကပြောသည်
ခရီးတစ်လျှောက်တွင်ကျွန်ုပ်၏ဆေးပြားများကိုမသောက်နိုင်ခဲ့ပါ။ ၃ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်ဆေးများနှင့်ပုံမှန်ပုံမှန်နေထိုင်ခဲ့သည်။ လကုန်။ ကျွန်ုပ်မဆင်းနိုင်ပါ။ ထို့အပြင်သူသည်ဆေးလုံးကိုတစ်လလုံးသောက်လျှင်၎င်းသည်ကလေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်
ငါ meliane ကိုတစ်နှစ်ကျော်သောက်ခဲ့ဖူးပေမယ့်ငါ့မှာသုံးလတာကာလမရှိခဲ့ဘူး။ ကိုယ်ဝန် ၄ ခုကိုငါစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ၄ ယောက်စလုံးကအပျက်သဘောဆောင်တယ်။ ငါကိုယ်ဝန်ရှိနေသေးလို့စမ်းသပ်မှုကသတိမပြုမိဘူးလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ။ အကူအညီလိုအပ်တယ်။ ငါသန္ဓေတားဆေးဘူးကိုမပြီးသေးဘူး၊ ငါ့ကာလရောက်လာတယ်။ ငါနှစ်ခုပဲကျန်ခဲ့တယ်။ ငါဆေးလုံးမေ့သွားတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ box ကိုနှင့်ပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်?
Rosa Alicia iraheta ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ နံနက်အချိန်ရောက်ရင်၊ ညနေမှာဆေးသောက်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်ပြproblemနာမရှိပါဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်အချိန်ကုန်လာတာနဲ့အမျှယူဖို့လိုတယ်။
Rosa Alicia iraheta သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် belara ယူပြီး ၇ ရက်ကြာနားမနေပါ။ psss ကျွန်ုပ်အချိန်ကိုရပ်တန့်ခြင်းမပြုဘဲဆက်လက် ပြုလုပ်၍ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
ဟဲလိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်၊ ၂၈ ခုပါစာချုပ်များကိုကိုင်တွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ၇ ရက်တာအနားယူချိန်နှင့်ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့တွင်လေးထောင့်ကွက်ကိုစရန်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုပိုမိုလေးနက်မှုရှိကြောင်းယနေ့ညကျွန်တော်သဘောပေါက်ခဲ့သည် ငါအခြားတ ဦး တည်းနှင့်စတင်ခဲ့ပြီး 28 တက်ဘလက်အပြင်, ငါသည်အဘယ်သို့ငါသူတို့ကိုယူသင့်တယ်ဘာလဲ AHHH AND ငါလုပ်ခဲ့သောအပြောင်းအလဲအတွက်မည်သည့်စွန့်စားမှုမပြေးလျှင်? ငါဘာလုပ်သင့်လဲ?။ သင့်ရဲ့အဖြေကိုဖြစ်နိုင်သမျှမြန်မြန်စောင့်ဆိုင်းရန်သင့်အားများစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ မတိုင်မီကကျွန်ုပ်၏သံသရာကိုစတင်ခဲ့ခြင်းမေ့သွားသည်၊ ငါရာသီလာခြင်း၏ပထမနေ့တွင်တက်ဘလက် ၂၁ လုံးကိုမစတင်ခဲ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟယ်လို၊ ငါ Meliane ကိုနေ့စဉ်သောက်နေတယ်၊ ​​၅ နှစ်လောက်ကြာပြီ၊ ငါရာသီလာတဲ့အခါငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး ၂ ရက်အကြာမှာငါရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ ငါကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလား။
Romina quiroga ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို! ရင်သားကင်ဆာဆေးများသည်ရင်သားကင်ဆာမဟုတ်သောအခြားဆေးများကဲ့သို့ထိရောက်မှုရှိပါကကျွန်ုပ်သိလိုသည်။ ကျွန်တော့်မီးယပ်အထူးကုဆရာ ၀ န်ကငါသူတို့ကိုယူခဲ့ရင်တောင်ဒီဆေးဟာထိရောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အခြားသယ်ဆောင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသုံးသင့်သလား။ ငါမျှော်လင့်ထားသူတစ်စုံတစ်ယောက်အိုင်တီကိုဖယ်ရှားဖို့သိတယ်။ ငါဒီနည်းကိုယူမယ်လို့ပြောလို့သူတို့ဟာဒီနည်းကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလို့ငါထင်ထားတာငါသူတို့အပေါ်မှာမသက်ရောက်ဘူး။
Romina Quiroga အားပြန်ပြောပါ
ဟယ်လိုငါဆေးတွေကို ၁၀ နှစ်လောက်သောက်ပြီးပြီ။ အမှန်တရားကတော့သူတို့ကိုငါစွန့်ခွာတော့မယ်ငါကွန်ဒုံးကိုသာသုံးမယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာဆေးသောက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ပြsomeနာအချို့ရှိနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိချင်ပါသည်။
မည်သူမဆိုဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပါသလား ??? သို့မဟုတ်ပိုမိုစိုးရိမ်ပူပန်ရန်စိုးရိမ်နေကြသောသူများအတွက်သာကျွန်ုပ်တို့သည် bullshit ကဲ့သို့မေးမြန်းပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်မှာမေးခွန်းကြီးတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနဲ့အတူအားလပ်ရက်ခရီးထွက်ခဲ့တယ်၊ ၅ ရက်၊ ၆ ရက်လောက်မှာငါဆေးသောက်နေတယ်။ သူတို့ကသူတို့ကိုဟိုတယ်မှာပစ်ချလိုက်တယ်၊ ငါတို့ရှာခဲ့တယ်။ မည်သည့်ဆေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုမျှကျွန်ုပ်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်မွေးဖွားသောနေ့ရက်များစတင်ခဲ့သည့်နေ့၌ကျွန်ုပ်တွင်ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်မည်နည်း။
စကားမစပ်ငါမျက်နှာပေါ်ဆံပင်တွေလာနေတယ်၊ ​​ငါအကွက်ပြီးသွားရင်ဆေးလုံးကိုပြောင်းလို့ရမလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟယ်လို! ငါ 20- တက်ဘလက် Cyclomex21 တားဆေးကိုယူပြီးသူတို့သည်ကြာသပတေးနေ့တွင်ကုန်သွားပြီးကျွန်ုပ်ကာလတနင်္လာနေ့တွင်လာသည်။ ကျွန်ုပ်သောက်နေသည့် အချိန်မှစ၍ အမြဲတမ်းပြီးသွားပြီ၊ နောက်ဆုံးဆေးလုံးကိုမေ့သွားသည် (ကြာသပတေးနေ့) ။ တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်အချိန်ရောက်ရင်သဘောပေါက်လာတယ်၊ တနင်္လာနေ့ကိုရောက်ဖို့လိုမယ်ဆိုတာသူသိတယ်၊ တစ်နေ့မှာမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးဆီသွားပြီးငါမတိုင်ခင်နဲ့ပြီးနောက်မှာမလိင်ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ရင်ငါစယူသင့်တယ်လို့ပြောတယ် ငါကာလကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာနောက်တစ်နေ့သို့ပုံမှန်သွားစဉ်ပုံမှန်ရက်သတ္တပတ်ကုန်လွန်သွားသည့်တစ်နေ့တာအကွက်အသစ်တစ်ခု။ ဆေးပြားသောက်ဖို့မေ့သွားပြီးရက်ပေါင်းများစွာကုန်သွားရင်တစ်ယောက်ကစောင့်ရမယ်ဆိုတာသံသယဖြစ်စရာပါ။ ကာလ၏ပထမနေ့မှနောက်တစ်ရက်အတွက်စတင်ယူခြင်းသည်ဤကဲ့သို့ပင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
princess paula အားပြန်ကြားပါ
ငါက ၇ နှစ်လောက်မွေးထားတယ်။ ငါ့မှာကာလကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီလကငါမဆင်းဘူး။ ရောဂါလက္ခဏာတွေအားလုံးရှိခဲ့ပေမဲ့ငါအဖြေတစ်ခုလိုချင်တယ်။
ငါ KALA ကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးတွေကိုစတင်ယူခဲ့ပြီး ၁၉ ရက်ကြာဆေးသောက်ပြီးနောက်မှာကွန်ဒုံးမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဟာငါမဆုံးနိုင်သေးတဲ့အတွက်အလွန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသလား။ သတ္တမနေ့အပြီးငါဖတ်ပြီးကတည်းက ဆေးလုံးသည်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဒုတိယအကွက်အပြီးတွင်မကြေငြာရန်အကြံပြုလိုကြောင်းကျွန်ုပ်သိသော်လည်းသင့်အဖြေကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ ဆေးသောက်ပြီးနောက်မနက်တွင်မသောက်နိုင်ပါ၊
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏အချိန်သည်သြဂုတ်လ ၇ ရက်၊ နောက်ဆုံးကာလသည်ဇူလိုင်လ ၇ ရက်ဖြစ်သဖြင့်ယခုထိမလာသေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ် ၀ န်စစ်ဆေးမှု ၂ ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအပျက်သဘောဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် Ultrasound လည်းရှိခဲ့ပြီးဘာမျှမထွက်ပေါ်လာပါ။ နောက်တစ်နေ့တွင်ဆေးသောက်ရန်နှင့်၎င်းသည်ပြိုကျခြင်းရှိ၊ မရှိရှိမရှိကို ၇ ရက်စောင့်ဆိုင်းရန်ဆရာ ၀ န်ကကျွန်ုပ်အားပြောပါသည်။ ဘာအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်လဲ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ။ ။ အိုကေ၊ ဆရာဝန်ကဘာပြောတာလဲ ???
ဖြစ်နိုင်လျှင်အမြန်ဆုံးကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ် (သို့) တစ်ခုခုဖြေပါ
ငါသန္ဓေတားဆေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကသောက်ခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်ခါမှငါမှာပြproblemsနာမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီလကငါ့ကာလ ၂ ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီမတိုင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကငါတစ်ချိန်တည်းမှာမသောက်ခဲ့ဘူး၊ ငါလည်းဖိစီးခံခဲ့ရတယ်။ ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။ ကျွန်ုပ်၏မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Kala ဆေးပြားများကို ၂ လကြာသောက်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ကြွက်သားနာကျင်ခြင်းအတွက် ibuprofen, paracetamol သို့မဟုတ် Aspirin ကိုသောက်သုံးခြင်းမှာဆန့်ကျင်ဖက်လက္ခဏာများရှိမရှိသိလိုပါသလား။ ငါဆေးသောက်ပြီးကတည်းကငါ့ရဲ့ရည်းစားကငါထဲကိုထွက်လာတဲ့အချိန်တွေရှိသလား၊ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိလား။ ကြိုတင်ပြီးကျေးဇူးပါပဲ!
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၄ လက“ diva” တားဆေးဆေးများကိုစတင်သုံးစွဲခဲ့ပြီးယခုကျွန်ုပ်ရပ်တန့်သွားပြီးရာသီလာခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ၅ ရက်နောက်ကျနေပါပြီ။ ပုံမှန်လား၊ ဘယ်လောက်ကြာနိုင်လဲဆိုတာကိုငါသိချင်ခဲ့တယ်
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၂ လကကျွန်ုပ်ဆေးသောက်ပြီး (diane ၃၅) စတင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ထံပထမ ဦး ဆုံးရောက်သော အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည် ၄ ​​ပတ်ကြာသည်။ အများကြီးမဟုတ်ပေမယ့်ငါ panty ကှနျ့ဝတ်ဆင်နှင့်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှိသည် ... ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်လနှင့်တစ်နှစ်ခွဲကြာအောင်မွေးဖွားခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည့်ဆေးများကိုသောက်နေပြီဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၅ ရက်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည်ဆေးလုံးကိုလုံးလုံးလျားလျားသောက်သုံးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ဂရုမစိုက်ဘဲကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ နှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ငါနေမကောင်းဖြစ်စေသောအရာတစ်ခုခုကိုစားသောကြောင့်ငါ uvasal ယူ။ , ဒီဆေးပြားများ၏ထိရောက်မှုကိုထိခိုက်သလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မေးမြန်းချင်သည်၊ ငါရာသီလာခြင်းအစသုံးရက်မြောက်နေ့တွင်ဆေးပြားကိုစတင်ခဲ့သည်။ ယခုလတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုအပိုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်ဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်စတင်ခဲ့သည့်အတိုင်းထပ်တူအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ပထမနေ့?
ယခုငါသန္ဓေတားဆေးကိုစတင်စတင်ခဲ့သော်လည်းငါ ၂- ပါးသောက်ရန်မေ့သွားသည်၊ ရာသီလာခြင်း ၂ ရက်ကြာသည်။ သွေးဖြူရောင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ဆေးများကိုဆက်လက်သောက်သုံးနိုင်မနိုင်မသိနိုင်ပါ။
မင်္ဂလာပါကားလို့စ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအနေဖြင့်ဆေးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါကိုစတင်သောက်သင့်သည့်အချိန်သည်ရာသီလာခြင်း၏ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့ကြမျှော်လင့်ပါတယ်!
ငါသန္ဓေတားဆေးနဲ့သုံးလနေခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒီလမှာလည်းဆေးစစ်ဖို့မသွားခဲ့ဘူး၊ ငါ့ရည်းစားနဲ့အတူကွန်ဒုံးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ရက်ပေါင်းများစွာမှာကွန်ဒုံးမရှိဘဲအချိန်တိုလေးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။
သူသည်အတွင်းပိုင်းသို့မတက်ခဲ့သော်လည်းပြbutနာမှာကျွန်ုပ်သည် ၁ ပတ်နောက်ကျပြီးဖြစ်သောကြောင့်၊ ငါသန္ဓေတားဆေးကိုမသောက်တော့သည့်အခါပုံမှန်ရာသီလာခြင်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါလော။
ဒါဟာငါရေးဖို့ပထမ ဦး ဆုံးစာမျက်နှာဖြစ်ပြီးကျေးဇူးပြုပြီးအဖြေကိုပေးပါ
ဟိုင်း၊ ကျွန်ုပ်လစ္စ။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာဆေးလုံးကိုသောက်ပြီးနောက် ၂၁ ရက်သာရှိသေးသည်၊ အင်္ဂါနေ့နှင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ကျသွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ငါ၏ကာလဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်းစနေနေ့ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါမနေ့ကဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပေမယ့်ငါနေဆဲငါ lvs ဆေးပြားယူပြီးကိုယ့်ကိုယ့်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအလွန် ဦး နှောက်အာရုံကြောဖြစ်၏ ..
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်မေးခွန်းဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အောက်ပါငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်။ ဒါငါပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်။ နောက်တစ်နေ့တွင်ငါမွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည့်ဆေးပြားများစတင်သောက်ပြီး ၂၁ ချောင်းပြီးဆုံးသွားသည်။ ၇ ရက်ကိုငါမစောင့်နိုင်တော့ဘဲ ၂၁ လုံးဆေးပြားတစ်လုံးအသစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါစိတ်ပူမိတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတစ်လအတွင်းမှာငါ့ကာလကိုမရခဲ့လို့ပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလား ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုပြန်ပြောပါ !!!!!!!!!!! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် နှုတ်ဆက်ခြင်း!!!!!!!!!!!!!
မင်္ဂလာပါ၊ ယနေ့ငါရာသီလာပြီ၊ ဤကိစ္စတွင်နေ့စဉ်ဆေးပြားကိုပထမဆုံးအကြိမ်သောက်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းသည်ကျွန်ုပ်သည် ibuprofen ဆေးကိုသောက်လို့ရနိုင်မလား၊ ငါ၏ကာလသည်အလွန်နာကျင်သောကြောင့်၊ ဆေးသောက်ဆေးသည်ကျွန်ုပ်အားတစ်နည်းနည်းဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်ပါ့မလားမသိနိုင်ပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ဤတားဆေးကိုအသုံးပြုရန်ပိုကောင်းပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်၏အဖြေကိုစောင့်ပါ။
မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်ဆေးသောက်ပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အချိန်ဇယားကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာမေ့ ထား၍၊ မထူးဆန်းသောအရာတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်သည်တင်ပါးဆုံတွင်းနာကျင်မှုနှင့်မကြာခဏဆီးသွားခြင်းစသည်တို့ကိုမေ့သွားသည်။ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်မလား? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေးများကိုသောက်သောပထမဆုံးလဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးလုံး ၂၁ လုံးပြီးသည်နှင့်ပထမရက်တွင်လိင်မှုကိစ္စမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံမှုပြုပြီးနောက်ငါ၌အဘယ်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ငါမျှော်လင့်ပါတယ်ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောသုံးလခန့်ကဤ patch ကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ခဲ့သော်လည်းလွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်က၊ လွန်ခဲ့သော ၃ ပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည်အရေးပေါ်ဆေးလုံးကိုသောက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ကာလရောက်လာသောအခါ patch ကိုပြန်ထည့်လိုက်သည်၊ ကြီးကြပ်မှုမရှိပဲဆရာဝန်နှင့်ဤအချိန်၌ကျွန်ုပ်အဆင်ပြေစွာမခံစားရပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်သည်မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီးဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤ patch ကိုလျှောက်ထားရန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းသင့်သလော။ အဆင်မပြေမှုကဘာလဲ။ ကျွန်မအသက် ၁၆ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်၊ ဒါကငါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ခုခုရှိလားဆိုတာမသိဘူး။ အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါမင်းရဲ့အဖြေကိုစောင့်နေတယ်။
ကာရိုလိုင်းနား Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှု - ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်မှာကျွန်တော်ပုံမှန်ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ သြဂုတ်လ ၁ ရက်မှာအကာအကွယ်မဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးတယ်။ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှာငါပြန်ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ ၁၅ ရက်နေ့မှာငါပြန်လာပြီး ၁၇ ရက်နေ့မှာငါသန္ဓေတားဆေးကိုပြန်ယူလိုက်တယ်။ ပုံမှန်ရာသီဥတုကိုပုံမှန်လျှော့ချတော့မယ့်အချိန်ကိုသိချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းမှာမညီမမျှဖြစ်နေတာပါ။
carolina rodriguez သို့ပြန်သွားရန်
လွန်ခဲ့သော ၂ လကကျွန်ုပ်သည်မွေးဖွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ဆေးများကိုစတင်သောက်ခဲ့သော်လည်းပထမလမှသာယူပြီး၊ ကျွန်ုပ်တွင်ငွေမရှိသောကြောင့်ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်မယူဆောင်လာနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကာလသို့မဟုတ်လာသောအခါငါသူတို့ကိုယူသလား။ Plisss ပြန်ပြောပါ
မေးခွန်းတစ်ခုမှာ၊ ငါပထမ ဦး ဆုံးရာသီလာခြင်းတွင်သန္ဓေတားဆေး ၅ လုံးကိုယူသည်၊ ၎င်းသည်နောက်တစ်နေ့တွင်ငါ့ကိုဖြတ်သွားသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်ငါယောက်ျားလေးနှင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်ငါသန္ဓေတားဆေးဖြစ်သော်လည်းနောက်တစ်နေ့တွင်တဖန်ရာသီလာခြင်းနှင့် ၅ ရက်ကြာနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ အဖြေပေးပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေးကိုတစ်နှစ်နီးပါးကြာအောင်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တစ်လအနားယူခဲ့ပြီးနောက်တစ်ခါမည်သို့ယူရမည်ကိုမသိပါ။ မင်္ဂလာပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆေးလုံးတစ်ဝက်ဖြတ်ခြင်းကိုရပ်လိုက်လျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုသိလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ရာသီလာခြင်းမတိုင်မီ ၃ ရက်အလိုတွင်၊ ထိုလတွင်ထပ်မံလာရန်လိုပါသလား ??? ငါပြီးခဲ့သည့်လ3ရက်နေ့တွင်စိတ်ဆိုးခြင်းနှင့်ဆေးလုံးတစ်ဝက်မှထွက်ခွာပြီးနောက်, ငါလာရန်ရှိသည်သည့်အခါယခုလ 12 ရက်နေ့တွင်ငါ့ထံသို့လာ။
ကျွန်ုပ်သည် ၂ လတာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်၏ကာလကိုမရခဲ့ပါ။ သူသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုစမ်းသပ်မှုများကိုအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဆရာဝန်ကကျွန်ုပ်ကိုဆေးပြားပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကာလမရောက်သောအခါသူကကျွန်ုပ်အားဆေးထိုးရန်မပြောသောကြောင့်၎င်းကိုစတင်ယူရန်ပြောခဲ့သည်။ ငါဆင်းသက်လာလိမ့်မယ် ... ငါသိချင်တဲ့အချက်ကငါဟာငါ့အချိန်ကာလရဲ့ ၁ ရက်နေ့မှာငါမသောက်ရင်တောင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေခြင်းမှငါ့ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ xfavor cnt
ငါအရမ်းစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ခေါင်းကိုက်နေတဲ့အတွက်ဆေးတွေကိုမသောက်တော့ဘူး။ ရှကယ်လ်ကိုမပြီးခင်သူတို့ကိုငါထားခဲ့တယ်။ မေးခွန်းကသူတို့ကိုဘယ်တော့ထပ်စရမလဲ။
ဟယ်လို…။ ငါအရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့အဖြေတစ်ခုလိုအပ်တယ်။ ငါစိုးရိမ်တယ်။ ငါသန္ဓေတားဆေးကိုစတင်သောက်တယ်။ ဒုတိယတန်းမှာပထမဆုံးစာသေတ္တာကိုသွားခဲ့တယ် .. ငါကျန်ခဲ့တဲ့အperiod္ဌမဆေးပြားမှာငါ့ရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ငါ့ဆီပြန်လာပြီးငါဒုတိယတန်းတက်ဖို့သွားခဲ့တယ်။ ငါမစွန့်ခွာသေးဘူးငါသွေးထွက်နည်းတယ်၊ မသွားဘူး၊ ငါ့ Ovary လည်းနာတယ်။ ပုံမှန်လား။ ကျေးဇူးပြု။ ဖြေပါ
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဆေးပြားကိုယူပါ။ အမှားအယွင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေနှစ်ယောက်အားအတူတကွယူပါ။ နံနက်ယံ၌တစ်ည၊ ကျွန်ုပ်မေးသည့်မေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့ကို ဆက်လက်၍ (သို့) ကြာသပတေးနေ့မနက်ဖြန်အထိစောင့်ဆိုင်းရမည်လော။
မင်္ဂလာပါ၊ ၂ နှစ်လောက်မွေးထားတုန်းကပါ။ သူတို့နဲ့မတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့ရင်အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ ၂၁- တက်ဘလက် drumstick ကိုအပြီးသတ်ဖို့ငါမှာ ၉ ဆေးလုံးမရှိသေးပေမယ့် ၄ ခုစိုစွတ်ပြီး ၅ ယောက်ကကယ်တင်ခြင်းရခဲ့တယ်။ ပုံမှန် ၅ ဆက်သောက်ပေမယ့် ၄ ရက်လောက်မသောက်ခဲ့ဘူး၊ စိုစွတ်ခဲ့တယ်။ ။ ငါဘာမှဖြစ်မလာတော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနေတဲ့အချိန်မကြာခင်မှာပဲငါမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားပြီးသူကကျွန်တော့်ကို ၇ ရက်လောက်အနားယူပြီးတော့ဆေးတွေကိုထပ်သောက်တော့မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမသေချာဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတိယနေ့မှာငါသွေးထွက်နည်းတဲ့ဆေးအသစ်တွေကိုသောက်လိုက်တယ်၊ ဒါကငါနဲ့ဘယ်တုန်းကမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဆေးတွေကိုဆက်သောက်နေမလား၊ မသောက်တော့တာလားဆိုတာငါမသိဘူး။ ငါအနည်းငယ်ကြောက်တယ်။ ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အရေးပေါ်ဆေးလုံးကိုသောက်လျက် ၂၄ နာရီအကြာတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းမပြုလုပ်ဘဲလိင်ဆက်ဆံမှုပြုပါက၊ ၂၄ နာရီမတိုင်မီကပင်ဆေးလုံးသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသလား။ ezpero zu rezpuezta
z ဇယ် ဟုသူကပြောသည်
ငါသန္ဓေတားဆေးကိုသောက်နေတယ်ဆိုပါစို့၊ ကျွန်ုပ်မှာ ၅ ရက်သောက်နေတယ်။ keria x အရက်သောက်သုံးခြင်းက၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပျက်ပြားစေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါနဲ့ငါ့ရဲ့ရည်းစားမှာရှိတဲ့ငါ့ရဲ့ရည်းစားမှာဖြစ်ပျက်မှုတစ်ခုခုရှိလားဆိုတာငါသိချင်တယ်။
ဟဲ၊ ငါ Jesica ပါ။ မေးခွန်းကြီးတစ်ခုရှိသေးတယ်။ pillပြီလဆေးလုံးမှားသွားတယ်။ ငါ ၂၁ တက်ဘလက်တွေကောင်းကောင်းအပြီးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါပြီးသွားတဲ့အခါငါကသူတို့ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာသတိပြုမိတယ်။ ငါရှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာငါဆေးသောက်ပြီးမှတစ်လယူခဲ့တယ်၊ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ကိုယ်ဝန်၏? ကျေးဇူးပြု၍ အဖြေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြား (၂၈) လုံးမှ (၂၁) လုံးသို့ (မည်သို့) အခြားနည်းစနစ်များကိုမသုံးဘဲမိမိကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်ဘဲရပ်တန့်စရာမလိုဘဲမည်သို့ပြောင်းလဲရမည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆေးသောက်ချင်ပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးထံသွားရန်အလွန်ရှက်ရွံ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အကောင့်အတွက်ဆေးလုံးကိုယူနိုင်ပါသလား။
ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငါ့အချိန်ကာလကစောလွန်းတယ်။ ငါ့အရိုး contraceptive box (placebos) ကနေငါဆေးပြား ၃ ခုကျန်ခဲ့တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြားများကို ၁၅ ရက်ကြာသောက်နေပြီးထိုနေ့မှ စ၍ ကျွန်ုပ်အားမဆင်းနိုင်တော့ပါ။ ၎င်းသည်လာသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းဖြတ်ထုတ်ပစ်လိုက်သည်၊ ထို့နောက်၎င်းသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအညိုရောင်အရောင်များကျသွားပြီးကျွန်ုပ်အား Ulvide to သူတို့ကိုနှစ်ခါယူပါ။ တစ်ခါတစ်လေကျရင်ငါ့ကိုနည်းစေတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်လို့မထင်ဘူးလား။ ငါပြန်ကြားချက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်
Ana Castellanos ဟုသူကပြောသည်
ပထမအကြိမ်ငါအချိန်ကိုယူပြီး၊ ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောတစ်နေ့တာတွင်နှစ်ရက်ကြာသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြားကိုယူပါကဘာဖြစ်မည်နည်း။ အကျိုးသက်ရောက်မှုတို?
Ana Castellanos ကိုစာပြန်ပါ
Diane ယူဖို့တစ်နာရီလောက်အချိန်လိုပါသလား။ ငါနာရီအတိအကျယူမထားဘူးဆိုရင်, ဘာဖြစ်သွားမလဲ ဒါပေမယ့်ငါကတစ်နေ့ယူပြီးရပ်တန့်ကြပြီမဟုတ်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်ဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သိလိုသည်မှာကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်နက်ဖြန်နေ့၌ပါပိုစ့်များကိုယူသွားခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းည ၉ နာရီတွင်ကျွန်ုပ်ယူမိသည့်အခြားတစ်ကောင်မှာကျွန်ုပ်နှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများဖြစ်သည်။ ၈ နှင့် ၂၀ နှင့်နံနက် ၉ နာရီတွင်ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အဖြစ်အပျက်များ၊ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်မည်လားသို့မဟုတ်သင်ကျွန်ုပ်အားဖြေကြားမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်၊ အရေးတကြီးလိုအပ်ပါသည်၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပထမ ဦး ဆုံးနေ့၌မွေးဖွားခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည့်ဆေးပြားများကိုစတင်သောက်သုံးခဲ့သော်လည်းအချိန်ကာလအားဖြတ်တောက်ပြီး၊ ပုံမှန်လား ??? ကိုယ်ဝန်စစ်ဆေးမှုသည်အပျက်သဘောဆောင်သောကြောင့်ပြန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ sgte ဖြစ်သည်။ ငါ Femiplus စီဒီဆေးတွေကိုသောက်နေတယ်။ အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုပြုဖို့ ၂ ပတ်လောက်စောင့်ရမယ်၊ ၁၆ ရက်အထိငါရှိခဲ့ရင်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိသလားဆရာဝန်ကပြောတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပထမ ၄ လအတွက်ကျွန်ုပ်မွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်းသိထားပြီးကျွန်ုပ်သည်ကာလကိုအတူတူပင်ရက်ပေါင်းများစွာအတူတူခံစားခဲ့ရသော်လည်းယခုလတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကာလကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်ထံအမြဲတမ်းလာသည့် နေ့မှစ၍ တစ်ရက်နောက်ကျခြင်းဖြစ်သည်။ ငါကိုယ်ဝန်ရှိနေနိုင်မယ်။ ဆိတ်ကွယ်ရာငါ၌အချိန်စောင့်ဆိုင်းရန်နောက်ထပ်4ရက်ရှိသည်ပေမယ့်ငါ2ရက်အတွင်းနှောင့်နှေးခဲ့သည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemနာအနည်းငယ်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်မွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည့်ဆေးပြားများကိုသုံးနှစ်ကြာသောက်သုံးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးကာလသည်21ဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၀၉ တွင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင်ရောက်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်ကိုယ်ဝန်ရှိနေနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သိပါသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံပိုရှိသူတစ် ဦး ဦး ကိုဖြေပါ
ဟယ်လို!!! ငါသန္ဓေတားဆေးကိုသောက်နေတယ်ဆိုတာသံသယရှိတယ်။ ငါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆေးသောက်ဖို့မေ့ခဲ့တယ်။ ဆိုလိုတာကငါသောက်ရမယ့်အချိန် ၃-၄ နာရီအကြာမှာ၊ ငါသောက်တော့မသောက်ဘူး၊ ကျွန်မခင်ပွန်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးအတွင်းထဲ၌သန္ဓေတည်နေသည်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်သည်
nana အ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ carmine ဆေးများထိရောက်မှုရှိမရှိကျွန်တော်သိချင်ခဲ့တယ်၊ လွန်ခဲ့သောတစ်လကသူတို့ကိုစတင်သောက်ခဲ့ဖူးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်မရသေးသောကြောင့်၊ ဆေးပြား ၂၁ မှ ၂၈ သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ငါကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်သည် ?? ကျေးဇူးပြု၍ အဖြေ !!!!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀ ကြိမ်မြောက်နောက်ဆုံးဆေးလုံးကိုပြီးအောင်လုပ်ပြီး၊ ၁၁ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်၏အဖော်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့သည်။ သန္ဓေတည်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်ရှိရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ငါ manxando cm စင်ကြယ်သောရေ xfa ဖြေဆိုသလောက် ဖြစ်နိုင်အဖြေငါနုတ်ဆက်ပါတယ်စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အရေးပေါ်အခြေအနေအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ပါးစပ်ဖြင့်သန္ဓေတားဆေးကိုအသုံးပြုသည်။ လက်ကမ်းစာစောင်တွင်သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်ဘဲလိင်ဆက်ဆံလျှင်၊ ၃ ကိုအမြန်ဆုံးယူနိုင်ပြီး၊ (၁၂) နာရီမှာကောင်းကောင်းငါကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယအကြိမ်နဲ့ငါ့မွေးလာတဲ့နေ့မှာသူတို့ဟာ ၂ ရက်သွေးထွက်ခဲ့ရတယ်။ အခုဆိုရင်ငါ Ovary မှာတဖြည်းဖြည်းနှင်းကျလာတယ်။ ဒါပုံမှန်လား?
ဟိုင်း၊ ငါငါဆေးတွေသောက်ပြီးလိင်ဆက်ဆံတယ်။ နောက်တစ်နေ့ငါဆေးသောက်ဖို့မေ့လိုက်တယ်၊ ငါကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိတယ်။
ငါစုစုပေါင်း diva ရဲ့2box ကိုစတင်ခဲ့ပြီး, ဒီနေ့ဆေးလုံး 8 ကိုယူမယ့်အစားငါ9ယူ .. မနက်ဖြန်နံပါတ် 8 ယူလျှင်အတူတူပင်ဖြစ်သနည်း
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆေးကိုယူတာ ၁၅ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကျန်းမာရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပါကကျွန်ုပ်အနားယူသင့်သလားဆိုတာသိချင်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌လွန်ခဲ့သော ၅ လကကျွန်ုပ်၌ကလေးရှိခဲ့ပြီး၊ ဆေးလုံးကိုစတင်သောက်ခဲ့သော်လည်းလွန်ခဲ့သောတစ်လက၎င်းတို့အားမသောက်တော့ပါ။ ထိုနည်းတူစွာ၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံတိုင်းကွန်ဒုံးဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ပြီး ၁၅ ရက်နောက်ကျခဲ့သည် .. ဆိုလိုတာကကိုယ်ဝန်လား၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ပါတယ်
ငါသေတ္တာထဲမှာနောက်ဆုံး contraceptive ယူပြီးရပ်တန့်သောအခါအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်, ငါအမှားအားဖြင့်ငါထိုနေ့ထိုနေ့2ဆေးပြားကိုယူ။ ငါလ၏နောက်ဆုံးကုန်ဆုံးကတည်းက ... ။
မင်္ဂလာပါ။ ငါမတိုင်မီကတည်းကငါ၏အရာသီလာခြင်းပြတ်တောက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာတွင်သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်သုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemsနာရှိမရှိသိရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကိုငါတကယ်ဂရုမစိုက်တော့တာငါပထမဆုံးအကြိမ်ငါဂရုစိုက်စပြုလာပြီ၊ ဘယ်အချိန်မှာစယူရမလဲဆိုတာငါမသိတော့ဘူး၊ ရာသီလာတာဒါမှမဟုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းစတာတွေအပြင်ငါဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်တယ် ရာသီလာခြင်းရပ်ပြီးနှစ်ရက်အကြာတွင်လိင်ဆက်ဆံလျှင်၊ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါကျေးဇူးပြုပြီးသိရန်လိုအပ်သည်🙂
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် trolit ဟုခေါ်သောသန္ဓေတားဆေးကိုတစ်နှစ်သောက်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြားများနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာဂရုစိုက်ပါကကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်မည်လော။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၁ ရက်လုံးလုံးဆေးလုံးကိုမသောက်ပါက၊ ၇ ရက်ကြာနားနားမနေလျှင် ၅ ရက်သာအနားယူပါကဘာဖြစ်မည်နည်း။
သင်ပထမ ဦး ဆုံးသေတ္တာဘူးပြီးနောက်, သင်သည်အကာအကွယ်မရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံနိုင် ???
မင်္ဂလာပါ၊ နောက်ဆေးသောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့နောက်တစ်ခါသောက်ပြီးရပ်လိုက်တာ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ဖြေဆိုပါ ဦး ။ ငါအချိန်ယူပြီးနောက် ၆ ရက်မြောက်နေ့မှာနောက်ထပ်သေတ္တာအသစ်ကိုယူသွားတယ်။ အကျိုးဆက်တွေကဘာလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုသံသယကင်းစွာနေစေချင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ တွင်ဖျားနာခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်နောက်ဆက်တွဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့သော်လည်းအောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင်သူသည်ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ ၁၂ နှစ်မြောက်တွင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်ဆေးလုံးကိုသောက်လိုက်သည်။ အင်္ဂါနေ့တွင်မနက် ၁၀း၃၀ တွင်အခြားတစ်ခုကိုယူလိုက်သည်။ ထို့နောက်မှကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်မဲ့ဆက်ဆံရေးဆက်ရှိနေသည်။ သို့သော်သူသည်ကျွန်ုပ်အတွင်း၌အဆုံးသတ်မသွားခဲ့ပါ၊ ၂၇ ရက်နေ့တွင်သူသည်ကျွန်ုပ်အတွင်း၌အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါကိုယ်ဝန်ရှိသလားသိချင်ရင်ငါလာမယ့်နေ့မှာငါဆေးသောက်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသာကိုယ်ဝန်ရှိနေရင်ငါ့ရဲ့ကလေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မှာကိုငါစိုးရိမ်တယ်။ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်မှ စ၍ ငါဖျားနာတော့မည်ဟုခံစားနေရသည်။ ငါ 28,29,30/10 ဖြစ်ကြောင်းယခုတိုင်အောင်ဘာမျှငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိကြပါ
ဟယ်လိုငါသန္ဓေတားဆေးသုံးတာကြာပြီ၊ 8 နှစ်အရည်နှင့်အနှစ်5ဆေးလုံး။ ငါ့မှာကလေးမရှိဘူး၊ သားဖွားဆရာမကသန္ဓေတားဆေးကိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုတဲ့အတွက်သူမပိုးမွှားပြီးမိခင်ဖြစ်ချင်ရင်ကိုယ်ဝန်ရဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။
မေးခွန်းတစ်ခုကိုဆေးညွှန်းမပါဘဲသောက်နိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ
ဟိုင်းငါမင်းကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တယ်။ ငါဘုရားကိုစယူခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကငါရာသီလာမယ့်ရာစုတုန်းကမဟုတ်ဘူး၊ တစ်ခုခုမှားလား
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တစ် ဦး ထက်ပိုသောမွေးဖွားခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည့်ဆေးများကိုသောက်နေပြီ။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်နှင့်နေ့အချိန်၌၎င်းကိုသောက်ရန်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ပျက်သွားသောအခါကျွန်ုပ်သိလိုပါသည်။ သူသည်အနားယူချိန်တွင်ရှိလျှင်သင်သည်ရာသီလာသောအခါ၌ပင်သင်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိသလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားမြန်မြန်ဖြေဆိုပါကကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဟယ်လို။ ငါ yasminel ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆေးပြားကိုယူပြီးအကြောင်းကိုမေးမြန်းချက်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးလကငါသူတို့ကိုမယူတော့ဘူး။ လွန်ခဲ့သောတစ်ပါတ်ကကျွန်ုပ် ထပ်မံ၍ စတင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောကြောင့်၊ မီးခိုးမြူပေါက်ကွဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဆီသို့မလာပါ။ တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်နည်းနည်းမှမထနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကာလတစ်ခုမရရှိပါကတစ်ရက်မျှသာကြာသော်လည်း၊ အားသာချက်နဲ့သူတို့ကိုထိုနေ့ရက်ကိုယူပြီးစတင်ခဲ့တယ် ... အကယ်၍ ငါ့အချိန်မဟုတ်ရင်ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုယူလာခဲ့ရင်ကော။
အပြာရောင် anabela ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လိုမင်းကိုငါသံသယ ၀ င်နိုင်အောင်ချက်ချင်းလိုအပ်ပါတယ်။
ရလဒ်များကျွန်ုပ်သည် DIVINA ၏စာချုပ်များကို စတင်၍ နံပါတ် ၇ မှ စ၍ ၁ မှစတင်ခဲ့သည်။ 1765432 .. ETC ..
ကျွန်ုပ်သည်ထိုအတိုင်းအတာကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေသည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်သိလိုပါလိမ့်မည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ SSSSSSSSSSSS
anabela celeste အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်သူတို့ကိုမယူလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ကွဲပြားသောအချိန်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်အားမခေါ်လျှင်ကော။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါသည်။ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာငါတစ်နှစ်လုံးတားဆေးထိုးဆေးတွေကိုသောက်တယ်။ သေတ္တာထဲကိုတစ်ဝက်လောက်ရောက်နေပြီဆိုရင်ငါမသောက်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်အခုတော့မလာသေးဘူး၊ ငါ ၉ ရဖို့လိုတယ်၊ ငါတို့ ၁၅ နှစ်ရှိပြီ။ ငါဘာမှမမှားဘူး ... သင်တစ်နေ့ကနေနောက်တစ်နေ့အထိဆေးတွေကိုမသောက်တော့တာကြောင့်လို့ခင်ဗျားထင်သလား။ သံသရာလား ငါ့ကိုဘယ်သူကူညီသူသိတယ်ကျေးဇူးပြုပြီး!
ငါ anulett ယူပြီးငါသူတို့ပြီးသားငါ့ကိုနှစ်ခုဘလူးပေး။ ငါ့အချိန်ရောက်လာမထားဘူး, သငျသညျအကြှနျုပျကိုရှင်းပြချက်ပေးပါ
ဟယ်လို! ငါ anulette cd ယူပြီးမနေ့ကငါ pill2ကိုယူခဲ့ရတယ်ဒါပေမယ့်ငါကယူကြဘူးထင်နှင့်ခဏအကြာတွင်ငါနောက်နံပါတ်3ယူဆိုလိုတာကနံပါတ်4ဆိုလိုတာကပြpillနာကအခုဘယ်ဆေးကိုသောက်ရမှန်းမသိဘူး။ ... နံပါတ် -၄ ကိုဆက်ယူနေတယ်၊ ​​ဒါမှမဟုတ်ငါကအခြားအစုတခုထဲမှ ၃ ကိုဆိုလိုတာဒီနေ့နှင့်တူသောသူကိုယူသလား။ ဘာပြproblemsနာများဆောင်ကြဉ်းနိုင်သနည်း ကျေးဇူးပြု။ ဖြေပါ!!!!!!!!
ဟယ်လို! ငါသံသယရှိတယ်! မနေ့ကနံနက်ဆေးသောက်ရင်ငါသာမန်ဆေးတွေထိုးနေ ဦး မှာလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၁၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ ပထမဆုံးသောပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ KIRUM 16 တက်ဘလက်နှင့်အရက် ၇၀ ကိုသန္ဓေတားဆေးကိုကျွန်ုပ်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သွေးအားနည်းခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံစားခဲ့ရကြောင်းသံသယရှိပြီးနှစ်ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်စတင်သောက်သုံးသည့် box ကိုပြီးဆုံးသွားသည်။ ပထမကာလကျွန်ုပ်၏ကာလကိုနောက်တစ်နေ့ရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကာလပြန်လာသောအခါသို့မဟုတ်အခြားအကူအညီဖြင့်ဤအစကိုအပြီးသတ်လျှင်၎င်းကိုယူရန်လိုအပ်ပါသလား။
Wenas သည် ysaminelle ကိုတစ်နှစ်ခွဲကြာအောင်ခံယူသော်လည်း ၂ လတာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကာလမရောက်ရှိခဲ့ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကြွယ်ဝသော၊ မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးထံသို့သွားပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်အား trigynovin ကိုပို့ခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါကောင်းသောည ... ကျွန်ုပ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူပါမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ နောက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) အင်္ဂါနေ့မှာငါရာသီအလိုက်သံသရာပြီးသွားတယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံပြီးအရေးပေါ်ဆေးကို ၁၁း၀၀ နာရီမှာယူခဲ့တယ်။ ည၊ နောက်တစ်နေ့ငါ ၁၂ နာရီကြာမှယူရန်မေ့ခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့ည ၈း၀၀ အထိငါသတိရနေတယ်။ သောကြာနေ့မှာငါသွေးထွက်ခဲ့ရတယ်၊ အစပိုင်းမှာတော့ပုံမှန်လို့ထင်ခဲ့တယ် ' ဆေးလုံးသည်ဟော်မုန်းဆိုင်ရာပြonနာများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ သို့သော်ယခု ၁၀ ရက်ကျော်လွန်သွားပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်သွေးထွက်ဆဲဆဲ၊ ဤသည်မှာများပြားလှသည်။ ကျွန်ုပ်စိတ်ပူပြီးမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ထံသွားသင့်သလား။ ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်လား? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးကာလသည်နို ၀ င်ဘာ ၁၃ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိပြင်းထန်သောသွေးထွက်သံယိုဖြစ်သည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့တွင်သန္ဓေတားဆေးကိုစတင်သောက်ခဲ့ပြီးနို ၀ င်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့လျှင်ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ပါသလား။ ကျေးဇူးပြုပြီးအဖြေပေးပါ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်မှာ babygirl_13 @ hotmail ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေးကိုအတန်အသင့်စိတ်ကျရောဂါကိုကျော်လွှားရန်အသုံးဝင်နိုင်ဖွယ်ရှိမရှိမေးမြန်းလိုသည်။ ငါသိ၏ငါဆေးပြား၏အထုပ်လက်ကမ်းစာစောင်တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်တွင်စိတ်ကျရောဂါရှိပါက၎င်းတို့ကိုမသုံးရန်အကြံပြုသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်မှားကောင်းမှားနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၌ဟော်မုန်းညီမျှမှုသို့မဟုတ်အလားတူအရာတစ်ခုခုရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သန္ဓေတားဆေးသည်ကောင်းမွန်လိမ့်မည်။
yoanna ပါ ဟုသူကပြောသည်
ငါ့သမီးကငါ့ကိုဆေးလုံးတစ်လုံးယူတယ်။ သူမဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ သမီးက ၃ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ငါမှာတစ်ခုထက်နည်းနေတယ်။
bettina Arari ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီတနင်္ဂနွေမှာငါဆေးပြားနှစ်ချောင်းယူပြီး၊ တနင်္လာနေ့မှာယူမယ်၊ အင်္ဂါနေ့မှာယူမယ်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြက္ခဒိန်နဲ့ကိုက်ညီအောင်မလုပ်တော့ဘူး၊ ယနေ့ကြာသပတေးနေ့၊ ငါကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့သလား ဒါမှမဟုတ်ငါနောက်တဖန်အားလုံးစတင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် ကူညီပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
bettina arias အားပြန်ပြောပါ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များ၌စတင်သောက်သုံးခဲ့ပြီး Diva 28-day contraceptive pill ကိုသောက်သည့်နေ့ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်မည်ကိုသိလိုခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ရာသီလာခြင်း၏ပထမနေ့တွင်ဆေးစတင်သောက်ရန်လုံးဝလိုအပ်ပါသလားသို့မဟုတ်၎င်းကိုရက်အနည်းငယ်မတိုင်မှီသောက်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်သိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုဖြေဆိုပါကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ။ ကြည့်ရအောင်၊ ငါဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က Edelsin ဆေးတွေသောက်နေတယ်။ ဒီလမှာငါလေးဆေးပြားကိုသောက်ပြီးသူတို့ကအရမ်းများလွန်းတယ်၊ ငါဘယ်လိုသွေးထွက်တာလဲ၊ ငါ့သံသရာကိုပြန်တည်ငြိမ်အောင်မရပ်တန့်စေနဲ့လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ကာလနှစ်ခုအတွင်းအတန်းတစ်ခုတည်းရှိခြင်းတွင်အန္တရာယ်မရှိပါလား။ ငါ့ရဲ့ရည်းစားကသိတယ်၊ ငါတို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ထားပေမယ့်ငါ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေလို့ငါဆက်ဆံရေးကမခံစားရဘူးလား။
နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုမှာရှုပ်ထွေးသောဆက်နွယ်မှုများရှိသည့်ဆေးလုံးကိုသောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ (ဆက်ဆံမှုကာလအတွင်းနှင့်အပြီးခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်း၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဆီးနှင့်မှိုရောဂါများစွာကူးစက်ခြင်း) ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့၊ သင့်ကာလ၏ပထမနေ့တွင်သန္ဓေတားဆေးကိုစတင်ရန်လုံးဝလိုအပ်သည်။ ဒါကတားဆေးကာကွယ်မှုပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ထိုနေ့ကိုသင်မသောက်ပါက၊ ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အရာနှင့်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်သင့်ကိုယ်သင်မည်သို့ဆက်လက်ဂရုစိုက်သင့်သည်ကိုရှာဖွေရန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
ငါဘာမှားနေတာလဲသိချင်လား အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့မှာသူကကျွန်တော့်ဆီလာပြီး ၇ ရက်ကြာလာခဲ့တယ်။ ငါ ၂၀ မှာဆေးလုံးတွေကိုပြီးအောင်လုပ်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မကိုယ်ခန္ဓာကိုတစ်လအနားယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ မလာသေးဘူး၊ ငါလိင်ဆက်ဆံသော်လည်းငါဂရုစိုက်ခဲ့တယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆေးပြားတွေ၊ ကွန်ဒုံးနဲ့ကျွန်တော့်ရည်းစားနဲ့ပါ။ ကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံတာကိုဆက်လက်ခံယူနေပြီးသူဟာသူကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်နေပါတယ်။ သူဘာကြောင့်သူမလာသေးတာလဲ။
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၁၀ ရက်ကဆရာဝန်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခဲ့သည့်သန္ဓေတားဆေးကိုမသောက်တော့ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကလေးကိုနို့တိုက်နေစဉ်၎င်းတို့သည်အက်စထရိုဂျင်ကင်းစင်ပါသည်။ ကျွန်တော့်အချိန်ကောင်းကမရောက်သေးဘူး၊ ပုံမှန်လား? သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်ယခုရောက်ရှိနေပါသလော။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ကမွေးဖွားမှုအတွက်တားဆီးဆေးများသောက်သုံးသည်။ နောက်တစ်နေ့ငါ ၂ ရက်၊ ၂ ပတ်အကြာ၌ဤအရာအားလုံးကိုယူလာသည်ကိုသတိပြုမိသည့်နေ့တွင်ငါသောက်ရန်မေ့သွားခဲ့သည်။ ငါရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ ဒီအရာအားလုံးကနေနောက်မှကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ခြေရှိသလား
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေးကိုပြန်လည်ယူပြီး၊ ဆေးတစ်ချောင်းသောက်ရန်မေ့သွားသည် ဖြစ်၍ လွန်ခဲ့သော ၃ လကကျွန်ုပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုဖြတ်တောက်ရန်နှင့်လာမည့်လကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်ဖြတ်သောဆေးများကိုနို ၀ င်ဘာ ၁၄ ရက်တွင်ရောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုနိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်နဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့မှာပြန်ရောက်လာတယ်။ ငါ့ကိုအတော်များများတွေ့ခဲ့တယ်၊ ပုံမှန်လား ??? ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..
ငါတက်ဘလက်တွေကိုယူနေတယ်။ ငါသောက်မိတာတစ်ညတည်းမှာအန်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်အဲဒါကိုမသောက်ဘူးလို့ငါသိတယ်။ ငါလည်းရက်အနည်းငယ်လောက်ကတည်းကခွဲစိတ်ကုသမှုခံလိုက်ရတယ်။ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုငါ့မှာသွေးထွက်များလာပြီ၊ ငါထွက်သွားတဲ့နောက်ဆုံးဆေးပြီးအောင်ဆေးပြား ၂၁ လုံးသေတ္တာအသစ်ကိုယူသင့်သလားဆိုတာငါသိချင်တယ်။ ???? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟိုင်းနေကောင်းလား? ဆေး၏အဖုအကျိတ်မပြီးမှီ ၅ ရက်အလိုတွင်ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဆေးများကိုဆက်လက်သောက်သုံးခဲ့သည်။ မနေ့ကငါဆေးသောက်ပြီးသည့်အခါပျောက်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အရည်ကြည်ဖုအသစ်ကိုချက်ချင်းစတင်စတင်ရန်၊ သို့မဟုတ်ပုံမှန်အားဖြင့် ၅ ရက်မှ ၆ ရက်စောင့်ဆိုင်းရန်ကျွန်ုပ်ရှိရာသို့လာပြီးနောက်မှယူလာခြင်းရှိမရှိမသိသောကြောင့်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ အမှန်တရားဟာကျွန်တော့်ကိုတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်တာကိုရပ်တန့်လို့မရတဲ့အတွက်ငါဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ချင်တယ်။ သင်၏ချက်ချင်းတုန့်ပြန်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လေးစားပါတယ်
မင်္ဂလာပါငါလိင်ဆက်ဆံတယ်။ အကာအကွယ်မပေးဘဲ၊ ငါချစ်သူကိုတတိယမြောက်နေ့၌သုံးကြိမ်မြောက်သွားတယ်။ ငါဆေးသောက်လိုက်တယ်။ ငါယူလိုက်ရင်နာကျင်မှုအနည်းငယ်ခံစားရပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအစွန်းအထင်းလေးတစ်ခုရှိတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ အသွေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပေမယ့်တဝက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖြစ်ပေမယ့်မုန့်စိမ်းကဲ့သို့အဖြူရောင်တစ်ခုခုနဲ့ပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး ... အဲဒါက ... ငါမှလွဲရင်တခါတရံမှာအရမ်းမမှန်ပါဘူး ငါနိမ့်သည် ... ငါ3လကစား ... ပြီးတော့တစ်ပါတ် xfa ငါ့ကိုဖြေပါ ... ငါအသက်4နှစ် ... သူငါနှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးကောင်လေးဖြစ်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့်ငါအဘို့အ သူမဟုတ်ဘူး
ဤသတင်းစကား၏အကြောင်းရင်းမှာကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပျက်သောအရာမှာကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေးကိုတစ်နှစ်သောက်သုံးခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောကြောင့်ကိုယ်ဝန်မရရန်ဂရုစိုက်ရန်လည်းပြုလုပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီလမှာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြုံခဲ့ရတယ်၊ ငါရာသီလာမတိုင်ခင်တစ်ပတ်သွားရင်သွေးနီရဲလာတယ်၊ နောက်ရက်တွေမှာ ၄ ရက်နေလုံးလာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမသောက်ဘူး။ သွေးထွက်, ငါသာသန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပဝါအစွန်းအထင်း) ကလာမယ့်အပတ်ကငါ့ထံသို့လာရန်ထင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ထပ် ၇ ရက်အတွင်းမီးယပ်သားဖွားဆရာဝန်နှင့်ချိန်းဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ပျက်ရကြောင်းကျွန်ုပ်သိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စပ်စုသောကြောင့်သူတို့ကကျွန်ုပ်အားကူညီနိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဤသတင်းစကား၏အကြောင်းရင်းမှာကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပျက်သောအရာမှာကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေးကိုတစ်နှစ်သောက်သုံးခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောကြောင့်ကိုယ်ဝန်မရရန်ဂရုစိုက်ရန်လည်းပြုလုပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီလမှာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြုံခဲ့ရတယ်၊ ငါရာသီလာခြင်းကနေတစ်ပါတ်လောက်မှာမှောင်မိုက်တဲ့သွေးနီရဲပြီးနောက် ၄ ရက်နေ့အထိငါကဒီလိုအညိုရောင်ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆီးမှာမရှိပါဘူး။ သွေးထွက်, ငါသာသန့်ရှင်းလက်သုတ်ပဝါအစွန်းအထင်း) ကလာမယ့်အပတ်ကငါ့ထံသို့လာရန်ထင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ထပ် ၇ ရက်အတွင်းမီးယပ်သားဖွားဆရာဝန်နှင့်ချိန်းဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ပျက်ရကြောင်းကျွန်ုပ်သိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စပ်စုသောကြောင့်သူတို့ကကျွန်ုပ်အားကူညီနိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဒါ့အပြင် ၅ ရက်တိတိအချိန်ယူပြီးရောဂါကူးစက်ရန်အတွက်ပantibိဇီဝဆေးကိုစတင်ခဲ့သော်လည်း၊ ၎င်းသည်သန္ဓေတားဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေကြောင်းသင်သိသောအချက် (၂) ချက်ကိုသင်မသောက်နိုင်ဟုပြောသောကြောင့်၎င်းကိုစွန့်ပစ်လိုက်သည်။ cnt xfii
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၂ လကရာသီလာခြင်းမပြုမီ ၁၅ ရက်ခန့်အညိုရောင်ထွက်လာပြီးကျွန်ုပ်စိုးရိမ်သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်ကကျွန်ုပ်သည်စုစုပေါင်း diva ယူခဲ့သည်။
နှစ်လအကြာမှာဒီဆေးကိုစတင်သောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမကာလကစပြီးသုံးရက်အကြာမှာဆေးသောက်တော့တာပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမနေ့ကစပြီး
Juan Diego ဟုသူကပြောသည်
hopla ငါသည်သူငယ်ချင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောအခါမည်သည့်အချိန်၌သူမသည်သူမဆေးများသောက်ပြီးပြီဆိုပါကသူမနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနိုင်သည့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဆေးများစတင်သောက်တော့မည်ကိုသိလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Juan Diego မှစာပြန်ပါ
သေတ္တာထဲရှိနောက်ဆုံးဆေးကိုမယူပါကမည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ နောက် ၇ ရက်အကြာမှာငါလာမလား။
ဟယ်လို!! ငါ yasminelle ကိုနေ့စဉ်ယူနေတယ်၊ ​​ငါကတတိယအပတ်မှာပါ။ တစ်ခုယူဖို့မေ့သွားတယ်။ နောက်နေ့ဆိုတာငါသိပြီးငါနဲ့တူညီတဲ့နေ့ကိုယူလိုက်တယ်။ ငါအပြင်းဖျားအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ပါကသို့မဟုတ်ငါရာသီလာသည်အထိစောင့်နေခြင်းရှိမရှိသိလိုပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သင်၏တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြားတစ်ပါတ်ကိုသောက်နေပြီး၊ ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်မှနှစ်ပတ်အကြာတွင်လာနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ပထမအပိုင်းပြီးဆုံးသည်နှင့်နောက်လာမည့်လေးထောင့်ကွက်ကိုယူနိုင်မလားသိလိုခဲ့သည် ။,
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆေးပြားကိုလအတော်ကြာသောက်နေပြီ။ ငါသံသရာကိုအစောပိုင်းရက်အနည်းငယ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်မနိုင်စမ်းကြည့်ချင်တယ်။ ငါနည်းနည်းplaċeboတက်ဘလက်ကိုယူ။ အခြား pack နှင့်အတူစတင်သင့်သလဲ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ
ငါ့မှာ Crohn ရောဂါရှိသည်။ ငါဆေးလုံးသည်ကိုယ်ဝန်မရှိခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ၊ မရှိကိုငါသိချင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုသုံးနှစ်ကြာသောက်ခဲ့ပြီးပြီ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာလွန်ခဲ့သော ၂ လခန့်ကကျွန်ုပ်သည်ရေချိုးခန်းသို့သွားနိုင်ပြီးစိတ်ရောကိုယ်ပါဖြစ်သော ciruelax သောက်နေစဉ်လွန်ခဲ့သည့် ၅ နှစ်ကကိုယ်ခံအားဆေးကိုသောက်ပြီးနောက်၎င်းသည်တစ်လလျှင် ၂ ကြိမ်နှင့်နောက်ရာသီသွေးလာခြင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တစ်လနီးပါးမျှမျှတတ pinkish mucosa ဘာမျှနီးပါး။
ငါကိုယ်ဝန်ရှိမရှိဆိုတာသိဖို့အရမ်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသန္ဓေတားဆေးကိုသောက်ပေမယ့်ဒီလမှာမတူညီတဲ့အချိန်တွေမှာယူခဲ့တယ်။ ၂-၃ နာရီ၊ အကြိမ် ၂ ကြိမ်၊ ငါသတိရတဲ့အခါငါယူခဲ့တယ်။ , ယခုလတွင်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်တွေ့ဆုံမှုအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းသူသည်အမြဲတမ်းအတွင်း၌ ၀ င်လာသည်။ အဖြူရောင်ဆေးလုံးများပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာယနေ့ကျွန်ုပ်အချိန်ကိုရသင့်သည်။ ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၄ ရက်နောက်ကျပြီး၊ ငါအချိန်ရလိမ့်မယ်, ငါကိုယ်ဝန်ရှိပါသလား မနေ့ကငါမှာကွန်ဒုံးမရှိဘဲနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်
ငါသန္ဓေတားဆေးတံသင်ကိုယူ။ ငါ့ရည်းစားနှင့်အတူဖြတ်အဖြစ်ငါကြာမြင့်စွာအကြာတွင်မည်သူမဆိုနှင့်အတူမရှိခဲ့ဘူးငါကသူတို့ကိုယူ။ ရပ်တန့်ယခုငါရည်းစားနှင့်အတူပြန်လာ, ငါပြန်ယူ။ , ငါယူပြီးဖြစ်ကြောင်းတူညီတဲ့အမှတ်တံဆိပ်နှင့်စတင်ခဲ့ပြီးကတည်းက ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်ကငါနေမကောင်းဖြစ်နေပြီ၊ ပုံမှန်ပဲ၊ ထပ်တိုးအချက်တစ်ချက်လည်းရှိသေးတယ်၊ ငါရယ်နေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုနည်းနေတယ်။
HOlA ငါ Valeria၊ Yasmin ဆေးတွေကိုယူပါတယ်။ ဒီလမှာငါ ၂ ကြိမ်လာခဲ့တာ၊ ဒီလမှာငါဆေးပြားတစ်ဒါဇင်ကိုနှစ်ဆတိုးရမလား။ ဒါမှမဟုတ်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေးကို ၂ နှစ်ကြာသောက်နေပြီ။ ငါမကြာသေးမီကအရက်မသောက်တော့ဘဲတစ်ပတ်ကျော်လောက်နောက်ကျသွားပြီးထိုအချိန်တွင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ၃ ကြိမ်စွန့်ခွာခဲ့ရသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ရည်းစားသည်သူ့ကိုယ်သူဂရုစိုက်ခဲ့သည်။ ဆုံးရှုံးမှုနှောင့်နှေးတာဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် ????????
ငါကာကွယ်မှုပိုမိုရရှိရန်, မည်သို့ပင်ဖြစ်စေငါကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြု, ငါမွေးဖွားထိန်းချုပ်ရေးဆေးပြားယူပါ။
အခြေအနေကလွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြားများကိုအလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်ထိရောက်မှုသည်အလွန်အားကိုးအားထားပြုခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ကွန်ဒုံးပြတ်သွားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ကြိမ်တာကာလတာရှိခဲ့သော်လည်းမည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်သည်ဆက်လက်သောက်နေကျဖြစ်သည်။ ဆေးပြား; ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာအဘယ်နည်းဖြင့်ဆေးများသည်သွေးထွက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသနည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ဝန်ရှိနေနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြားကိုသောက်သုံးခြင်းကြောင့်သွေးထွက်လွန်သွားခြင်းဖြစ်နိုင်သလား၊ သို့မဟုတ်သွေးထွက်ခြင်းဖြစ်နိုင်လျှင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်သလား။
မေးစရာရှိပါတယ်??? ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ပထမအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည့်ဆေးများ (cyclomex 20) ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျန်ရက်သတ္တပတ်၏နေ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်နာ။ နေလျှင်ကျွန်ုပ်၏ရင်သားများရောင်လာပြီးသားအိမ်နာကျင်မှုအနည်းငယ်သည်ကျွန်ုပ်ထံသို့လာလိမ့်မည်ဟူသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကဒီလမှာကျွန်မရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးကွန်ဒုံးမသုံးခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဆေးသောက်ဖို့မမေ့ခဲ့ဘူး၊ သူမကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလား။
နောက်ထပ်ရက်သတ္တပတ်၏အနားယူခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွင်းပိုင်း rapoa ကိုအညိုရောင်အရည်ဖြင့်စွန်းခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်နည်းပါးပြီးနှစ်ကြိမ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသနည်း။
ငါဆေးလုံးကိုယူပြီး ၂၅ ရက်သောကြာနေ့နောက်ဆုံးပြီးပြီ။ ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ ၂၇ မှာငါဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်။ ငါ၌ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အခွင့်အရေးရှိပါသလား။ ငါရိုက်ချက်၏အချိန်ကိုက်များသောအားဖြင့်ငါပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။
ငါဘုရားသခင့်ဆေးပြားကိုသောက်သုံးပြီး ၂၁ နှစ်အကြာတွင်ငါလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ပantibိဇီဝဆေးများ (amoxicillin) ကို ၂ ရက်သောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သူကအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိမရှိငါသိချင်တယ်
ငါဘုရားသခင့်ဆေးပြားကိုသောက်ပြီး ၂၁ နှစ်အကြာငါလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်၊ ပြafterနာကငါ ၂ ရက်လုံးလုံးပantibိဇီဝဆေး (amoxicillin) ကိုသောက်နေပြီဆိုတာပါ။ သူကအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိမရှိငါသိချင်တယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် ၂၁ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ် microvlar pilloli ကို ၆ နှစ်သောက်နေပါပြီ။ ဒီလမှာလည်းလတိုင်းလိုလို၊ ကျွန်ုပ်သည်ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်၊ စနေနေ့တွင်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်တော်မှားခဲ့ပါတယ်။ သောကြာနေ့ ... တနင်္ဂနွေနေ့မှာငါအမှားလုပ်မိပြီဆိုတာသိလိုက်တယ်။ စနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာငါပေါင်းသင်းခဲ့တာပေါ့။ ငါကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိသလား။ ... ငါအပူတပြင်းပါပဲ ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟယ်လို။ ငါသန္ဓေတားဆေးကိုသောက်ပြီး ၂၄ လုံး၏ပထမ ဦး ဆုံးဆေးလုံးကိုမေ့ရန်ကတည်းကကျွန်ုပ်သည်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးချင်ခဲ့သည်။ (Isis mini ၂၄ ကိုကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်ယူရမည်) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အန္တရာယ်ရှိပါသလား။ ကွန်ဒုံးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ပြီး ၇ ရက်စောင့်နေတာလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်မွေးဖွားမှုတားဆီးဆေးများသောက်သုံးနေသည်မှာတစ်နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်လကကျွန်ုပ်သည် ၅ ရက်ထက် ပို၍ နောက်ဆုတ်ခဲ့ရပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ သို့သော်တစ်နေ့တာတွင်သွေးပေါများမှုမရှိဘဲဆေးများကိုဆက်လက်သောက်သုံးနေပြီးယခုလတွင်၎င်းသည်ရောက်ရှိသင့်သော်လည်း၎င်းသည် ၃ ရက်လောက်ကြာရင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေနိုင်လား ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်ဆက်လက်သောက်နေတဲ့သန္ဓေတားဆေးကိုဘယ်လမှာသုံးရမလဲ။
Vivi ထံမှ ဟုသူကပြောသည်
အရည် (ငါရေချိုးခန်းသွားသည့်အခါ) ဒါပေမယ့်ဒီနေ့နည်းနည်းလျော့နည်းခဲ့သည်
ဆေးထိုးတာကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလက္ခဏာလား၊ လက္ခဏာလားဟုတ်လားငါသိချင်တယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌စိတ်ပူစရာတစ်ခုရှိသေးသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေးကို ၅ နှစ်အထက်ယူပြီးပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်ရာသီလာခြင်းမတိုင်မီတစ်ပတ်အလိုတွင်ရောက်ရှိပါကဘာဖြစ်မည်နည်း။ သင်အဖြေပေးနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ငါလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်2နာရီခန့်နောက်တစ်နေ့ဆေးသောက်ပြီးလျှင်, ငါဝက်သားကိုစားကြ၏။ သူတို့မူးယစ်ဆေးဝါးများကသူတို့ရဲ့ထိရောက်မှုကိုဆုံးရှုံးသည်ဟုဆိုသလား မှန်ပါတယ်? ငါကြောက်တယ်ငါ့ကိုကူညီပါ
ဟယ်လို၊ ဆေးမသောက်ဘဲဆေးထိုးပါ။ ပရိုဂျက်စတုန်းဆေးပြားကိုယူပါ။ သင်ဤဆေးကိုသောက်ခြင်းဖြင့်ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မည်လားကျွန်ုပ်မေးခွန်းဖြစ်သည်။
ငါ isis ကိုယူတာကြာပြီ၊ amoxic ပantibိဇီဝဆေးကိုသောက်လိုက်တယ်၊ ဆေးလုံးကနောက်တစ်ခါအကျိုးသက်ရောက်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာလဲ။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နှင့် 2010 ကောင်းသော
ကျွန်တော့်ရဲ့ပြသနာကဒီဆေးတွေကို (၄) ရက်လောက်သောက်ဖို့မေ့သွားတယ်။ ပြီးတော့ငါပေါ်လာတဲ့ရာသီလာပြီ။ သူတို့ကိုဆက်ပြီးသောက်ရမလား၊
မင်္ဂလာပါ၊ ခင်ဗျားကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆေးတွေကိုတစ်လလောက်သောက်နေပြီ၊ သေတ္တာအသစ်တစ်ခုနဲ့စပြီးပါပြီ၊ ဒါပေမယ့်သွေးနည်းနည်းရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာမသိဘူး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်
ကျွန်ုပ်သည်ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်ကျဆင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင်အကာအကွယ်မဲ့အကာအကွယ်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ဆေးလုံးကိုသောက်သုံးသည်။ ယခုငါဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး ၆ ရက်၌ကျဆင်းခဲ့သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် ၆ နှစ်နီးပါးကတည်းကကလေးမွေးဖွားခြင်းကိုတားဆီးနေပြီးယခုကိုယ်ဝန်ရလိုလျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ငါ့ကိုပြcomplနာတွေဆောင်ကြဉ်းသွားမလား
ဒီလမှာငါဟာအပြာရောင်ဆေးပြားကိုစတင်တော့မယ့်အချိန်မှာဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမပြည့်စုံသေးတဲ့စာအိတ်တစ်ခုရပြီး၊ သူတို့ကိုအဝါရောင်ဆေးပြားနဲ့အစားထိုးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါ့အချိန်ကာလမရောက်သေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လကငါနဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုမပြုခဲ့ဘူး။
ဟယ်လို။ လတိုင်းရဲ့ ၂၀ နဲ့ ၂၅ ကြားကာလကိုငါရတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်ကကျွန်မရဲ့နောက်ဆုံးကာလဖြစ်လို့အဲဒီနေ့မှာပဲပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့သန္ဓေတားဆေး (Microgynon CD) ကိုစတင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ငါ 20:25 p.m. မှာနေ့တိုင်းသန့်ရှင်းသောသူတို့ကိုယူပါ။ အရှိဆုံးမှာငါလေးနာရီကြာသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းအကြောင်းကိုနာရီစုံတွဲတစ်တွဲနှောင့်နှေးပါပြီ။ ငါသူတို့ကို [၈ ရက်] ခေါ်သွားပြီးငါမှာကွန်ဒုံးမရှိ၊ ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ငါရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ သူကကျွန်တော့်အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့သုတ်ရည်ကိုမထည့်ခဲ့ဘူး၊ ငါကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလား။ ငါ့အချိန်ကာလနှင့်ဆေးပြားများ၏အချိန်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား? တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်တော့်ကိုဖြေဆိုမယ်ဆိုရင်ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့နေရာတကာမှာအရူးလိုမေးပြီးအဖြေမရသေးလို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နုတ်ဆက်ပါတယ်
FLIA ။ SANTIAGO ဟုသူကပြောသည်
ငါသန္ဓေတားဆေးကိုလွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်ကကျွန်ုပ်အနေဖြင့်သွေးယိုခြင်းနှင့်စတင်ခဲ့ခြင်း၊ သန္ဓေတားဆေးများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိခြင်းကျွန်ုပ်သည်သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်နေကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်သည်။
FLIA သို့ပြန်သွားပါ။ SANTIAGO
ငါဆေးတွေကိုမသောက်တော့ဘူး။ ငါလိင်ဆက်ဆံတယ်။ ကျွန်မယောက်ျားကအိမ်ထဲဝင်လာတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်လား ???? ပြီးတော့သားဥအိမ်မှာလိုနာကျင်မှုခံစားရတယ်။
aguilar karmen ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သောက်ဆေးနံပါတ် ၆ တွင်မေးသည်ကိုမေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်အော့အန်လိုက်သည်၊ ၁၂ နာရီမတိုင်မီအခြားတစ်လုံးကိုယူပြီးညတွင်ပုံမှန်အတိုင်းပထမ ၇ ရက်တွင်ဂရုစိုက်ခဲ့သော်လည်းကြာသပတေးနေ့တွင်ကွန်ဒုံးမပါဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့ရသည်ကိုကျွန်ုပ်ကြောက်သည်။ ကိုယ်ဝန်ရလာမယ်၊ ပြproblemနာမရှိဘူး၊ ငါဆေးသောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့နံနက်မှာသောက်မယ်ဆိုတာငါမသိဘူး
karmen aguilar သို့ပြန်သွားရန်
တောင်းပန်ပါတယ်၊ မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါပြီ။ လွန်ခဲ့သော4လက microgynon cd ယူပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်ပူမိပါသည်၊ မည်သည့်ဆေးလုံးကိုမျှမမေ့ပါ၊ စာအားညွှန်ကြားချက်များကိုကျွန်ုပ်လိုက်နာခဲ့ပါသည်။ အမှုကကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးကာလကဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်ဖြစ်တယ်။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်မှာငါ့ဆီလာသင့်တယ်။ ဒါကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိခဲ့တယ်။ ဒါကပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်ငါမသိဘူး၊ ငါဖြစ်နိုင်ခြေရှိသလား။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလား
* အကယ်၍ အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီးသူမကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်ကိုမသိသောကြောင့်ဆေးများကိုဆက်သောက်နေလျှင် .. တစ်ခုခုမှားလား။
ကောင်းသောညကျွန်ုပ်၌သင်ရှင်းပြနိုင်သလားဆိုပါစို့။ ကျွန်ုပ်ရှစ်ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်ရာသီလာခြင်းသံသရာလွန်သွားပြီးဖြစ်သောကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်မရာသီစက်ဝန်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးဆေးပြားတစ်ဝက်ခန့်ကိုသောက်ခဲ့သည်။ နေ့စဉ်ဆေးပြားကိုထပ်မံသောက်ပါ၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်သောက်လေ့ရှိသောဆေးများကိုသောက်ရန်သံသယမရှိပါ။
ဟယ်လို။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးများကို ၄ လခန့်ကြာအောင်သောက်နေရပါသည်။ အဓိကအချက်ကဒီသံသရာပြီးအောင်သုံးရက်နဲ့ငါသွေးအနည်းငယ်ထွက်လာပြီးသွေးထွက်သံယိုပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာဝမ်းဗိုက်ထဲမှာအဆင်မပြေတာတွေဖြစ်သွားတယ်။ ငါရာသီလာခြင်း၏ပထမနေ့ကဲ့သို့ခံစားရတယ်။ ဒါဘာလို့ပုံမှန်လား၊ မကြာခဏဖြစ်တာလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏မြေသြဇာကောင်းသောနေ့ရက်များတွင်ရောက်ရှိနေပြီးမနေ့ကကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီး၊ မနက်ခင်းတွင်ဆေးသောက်ပြီးနောက်၊ မနေ့ကကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှု၊
ဟယ်လို!!!! ကျွန်ုပ်သည်အနားယူသည့်နေ့ရက်များ၊ ၃ ရက်မြောက်နေ့၌ကျွန်ုပ်သွားနေပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤရက်သတ္တပတ်ကိုမရောက်ရှိသေးလျှင်၊ ၈ ရက်မြောက်နေ့တွင်ဆေးလုံးကိုစတင်သုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကိုရောက်ရှိရန်စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းကိုကျွန်ုပ်သိလိုပါသည်။ ?????? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါအဖြေကိုမျှော်လင့်ပါတယ် !!!
Hello တနင်္လာနေ့တွင်ကျွန်ုပ်မည်သို့နေ့ရက်များ၏အမိန့်ကိုလိုက်နာပါသနည်း ??
ငါသန္ဓေတားဆေးကိုသောက်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ကိုယ်ဆန္ဒကကိုယ်ဝန်ရဖို့ပါ။ ငါလိုချင်ရင်ယူမသွားနိုင်ဘူးလား။ ငါကထွက်ခွာလျှင်မကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါ့မလား ???
ငါသန္ဓေတားဆေးကိုသောက်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ကိုယ်ဝန်ရချင်တယ်၊ မင်းမှာပြproblemနာမရှိဘဲဆေးလုံးကိုရပ်လို့ရမလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ငါသန္ဓေတားဆေးတစ်ဘူးပြီးသွားရင်အbox္ဌမနေ့ကမသောက်ဘဲ ၇ ရက်မြောက်သောနေ့၌နောက်သေတ္တာကိုစဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသိချင်တယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျားဘယ်လိုနေပါသလဲ။ ငါ lobelle တားဆေးကိုသောက်နေတယ်။ ဒီဆေးတွေကအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်၊ ​​ဆိုလိုတာက ၂၁ balncas နဲ့ ၇ ရက်အနီရောင်ဆေးတစ်မျိုးတည်းပါ ၀ င်တယ်။ ကျနော့်မေးခွန်းကတော့၊ အရက်မသောက်ဘူး၊ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေမရှိဘဲလား? ကျွန်ုပ်တို့၌၎င်းတို့သည်တစ်နှစ်နှင့်သုံးလရှိသော်လည်းအချိန်တိုအတွင်းကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုကိုမျှော်လင့်ပါသည်
မေးစရာရှိပါတယ်။ ငါမေ့လျော့ခြင်းနှင့်နှစ်ရက်ဆေးလုံးကိုယူပြီးတော့ဘူး။ ငါကာလတာရှည်လျားပြီးကျန်တဲ့အထုပ်အတွက်ဆက်သောက်နေတယ်။ ငါသံသယဖြစ်ပါကငါကွန်တိန်နာပြီးသွားသောအခါငါအနားယူခဲ့ပြီးအချိန်မရှိခဲ့ပါ။ တစ်ပါတ်အားလပ်ရက်ငါနောက်တစ်နေ့ကွန်တိန်နာနှင့်အတူပြန်လာ၏။ ငါ့မှာဆေးပြား ၅ လုံးရှိတယ်
ဟယ်လိုငါသန္ဓေတားဆေး (suaveuret) ကိုနှစ်အတော်ကြာသောက်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခါတော့ငါပantibိဇီဝဆေးတွေကိုစတင်ခဲ့တဲ့နေ့မှာအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့တဲ့အမှားကိုကျူးလွန်မိပြီးကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိသလားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်မသိပါဘူး အဲဒီနေ့ငါပAntိဇီဝဆေးနဲ့စတင်ခဲ့ငါသန္ဓေတားဆေးကိုယူခဲ့ရသည်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလကိုမလာသေးသောအခြား box ကိုစတင်ရန်ရှိခြင်းပြီးနောက်။ ကျွန်ုပ်ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ငါတစ်ယောက်တည်းမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တယ် ...
သင်၌ရှိလျှင်“ ဆေး” ကိုသောက်သင့်သည်